November 2016 | Language Century Language Century
10:05 PM C-Text , Chinese
ဒီခေတ်ထဲမှာ လူသားတွေရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး အဖော်ကတော့ ဟန်းဖုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အချိန်တိုင်းမှာ ဖုန်းပွတ်နေရင်တော့ အန္တရာယ်များလွန်းတယ်နော်။
手 机 对 现 在 的 人 来 说 太 重 要 了 。
အခုခေတ်လူတွေအနေနဲ့ပြောရရင် ဟန်းဖုန်းက အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။
在 商 场 、饭 店 和 火 车 站 里 ，我 们 可 以 看 到 很 多 人 在 玩 手 机 。
ဈေးတွေမှာ၊ ထမင်းဆိုင်တွေမှာ၊ ဘူတာရုံတွေထဲမှာ လူတွေအများကြီး ဖုန်းပွတ်နေတာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
但 有 些 时 候 ，低 头 玩 手 机 是 一 件 危 险 的 事 。
ဒါပေမယ့် တချို့အချိန်တွေမှာ ခေါင်းကြီးငုံ့ပြီး ဖုန်းပွတ်နေကြတာဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
近 日 ，在 西 安 地 铁 站 里 ， 一 名 女 子 一 边 看 手 机 一 边 下 楼 梯 。
ဒီရက်ပိုင်းက ' ရှီးအန်း ' မြေအောက်ဘူတာမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖုန်းကြည့်ရင်း လှေကားက ဆင်းလာတယ်။
她 没 注 意 脚 下 的 台 阶 ，一 脚 踩 空 ，从 台 阶 上 滚 了 下 来 。
သူမက သတိမထားမိဘဲ ခြေထောက်အောက်က လှေကားထစ်ကို နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ခြေထောက်တစ်ဖက်က လေထဲကို နင်းမိသွားပြီး လှေကားထစ်တွေပေါ်ကနေ လိမ့်ကျသွားပါတော့တယ်။
结 果 ，女 子 的 手 和 头 部 受 伤 。
မိန်းကလေးရဲ့ လက်နဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်းမှာ ဒါဏ်ရာရသွားတော့တာပေါ့။
有 些 时 候 ，我 们 不 能 一 心 二 用 。
တချို့အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့က ခေါင်းတစ်လုံးတည်းနဲ့ ရေအိုးနှစ်လုံး ရွက်လို့မရဘူး။ ( တစ်ချိန်တည်းမှာ အာရုံနှစ်ခုစိုက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး )
在 走 路 、吃 饭 、过 马 路 时 最 好 不 要 玩 手 机 。
လမ်းလျှောက်တာ၊ ထမင်းစားတာ၊ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ အချိန်တွေမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ ဖုန်းမပွတ်ပါနဲ့။
虽 然 手 机 很 重 要 ，但 安 全 更 重 要 。
ဖုန်းက အရမ်း အရေးကြီးပေမယ့်လည်း၊ အန္တရာယ်ကင်းဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
2. 对...来说〔duì...láishuō〕... အနေနဲ့ ပြောရရင်
6. 太〔tài〕အရမ်း။ သိပ်
8. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
9. 在〔zài〕... မှာ
10. 商场〔shāngchǎng〕 ဈေးတန်း
12. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
14. 里〔lǐ〕အထဲ။ အတွင်း
15. 我们〔wǒmen〕ငါတို့။ ကျွန်တော်တို့
16. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်။ လို့ရသည်
17. 看到〔kàndào〕 တွေ့ရသည်
19. 在〔zài〕... နေတုန်း။ နေဆဲ
20. 玩〔wán〕 ဆော့သည်။ ကစားသည်
24. 低头〔dītóu〕 ခေါင်းငုံ့သည်
26. 一件〔yíjiàn〕တစ်ခု။ တစ်ရပ်
28. 的〔de〕တဲ့။ ၏။ ရဲ့
30. 近日〔jìnrì〕အခုတလော။ ယခုရက်များ
31. 西安〔Xī ān〕ရှီးအန်းမြို့
32. 地铁站〔dìtiězhàn〕 မြေအောက်ဘူတာ
35. 一边...一边〔yìbiān...yìbiān〕... ရင်း ... ရင်း
37. 下〔xià〕ဆင်းသည်။ အောက်
38. 楼梯〔lóutī〕 လှေကား
40. 没注意〔méi zhùyì〕သတိမထားမိပါ
41. 脚〔jiǎo〕 ခြေထောက်
42. 台阶〔táijiē〕 လှေကားထစ်
43. 一脚〔yìjiǎo〕 ခြေထောက်တစ်ချာင်း
45. 空〔kōng〕ဗလာ။ ဟာလာဟင်းလင်း
46. 从〔cóng〕မှ။ က
47. 上〔shàng〕တက်သည်။ အပေါ်
48. 滚了下来〔gǔnle xiàlái〕လိမ့်ကျသွားသည်
53. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
54. 能〔néng〕... နိုင်သည်။ လို့ရသည်
55. 一心二用〔yì xīn èr yòng〕 ခေါင်းတစ်လုံးတည်းဖြင့် ရေအိုးနှစ်လုံးရွက်ခြင်း
58. 过马路〔guò mǎlù〕လမ်းဖြတ်ကူးသည်
59. 时〔shí〕... တဲ့အချိန်မှာ။ တဲ့အခါမှာ
61. 不要〔búyào〕မ ... နဲ့
62. 虽然〔suīrán〕 ပေမယ့်လည်း
64. 安全〔ān quán〕အန္တရာယ်ကင်းသည်
ဒီခတျေထဲမှာ လူသားတှရေဲ့ အရငျးနှီးဆုံး အဖျောကတော့ ဟနျးဖုနျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျတိုငျးမှာ ဖုနျးပှတျနရေငျတော့ အန်တရာယျမြားလှနျးတယျနျော။
အခုခတျေလူတှအေနနေဲ့ပွောရရငျ ဟနျးဖုနျးက အရမျး အရေးကွီးပါတယျ။
ဈေးတှမှော၊ ထမငျးဆိုငျတှမှော၊ ဘူတာရုံတှထေဲမှာ လူတှအေမြားကွီး ဖုနျးပှတျနတောကို ကြှနျတျောတို့ တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တခြို့အခြိနျတှမှော ခေါငျးကွီးငုံ့ပွီး ဖုနျးပှတျနကွေတာဟာ အန်တရာယျရှိတဲ့ ကိစ်စတဈခုပါပဲ။
ဒီရကျပိုငျးက ' ရှီးအနျး ' မွအေောကျဘူတာမှာ မိနျးကလေးတဈယောကျ ဖုနျးကွညျ့ရငျး လှကေားက ဆငျးလာတယျ။
သူမက သတိမထားမိဘဲ ခွထေောကျအောကျက လှကေားထဈကို နငျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ၊ ခွထေောကျတဈဖကျက လထေဲကို နငျးမိသှားပွီး လှကေားထဈတှပေျေါကနေ လိမျ့ကသြှားပါတော့တယျ။
မိနျးကလေးရဲ့ လကျနဲ့ ဦးခေါငျးပိုငျးမှာ ဒါဏျရာရသှားတော့တာပေါ့။
တခြို့အခြိနျတှမှော ကြှနျတျောတို့က ခေါငျးတဈလုံးတညျးနဲ့ ရအေိုးနှဈလုံး ရှကျလို့မရဘူး။ ( တဈခြိနျတညျးမှာ အာရုံနှဈခုစိုကျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျဘူး )
လမျးလြှောကျတာ၊ ထမငျးစားတာ၊ လမျးဖွတျကူးတဲ့ အခြိနျတှမှော အကောငျးဆုံးကတော့ ဖုနျးမပှတျပါနဲ့။
ဖုနျးက အရမျး အရေးကွီးပမေယျ့လညျး၊ အန်တရာယျကငျးဖို့က ပိုအရေးကွီးပါတယျ။
2. 对...来说〔duì...láishuō〕... အနနေဲ့ ပွောရရငျ
6. 太〔tài〕အရမျး။ သိပျ
8. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
9. 在〔zài〕... မှာ
10. 商场〔shāngchǎng〕 ဈေးတနျး
12. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
14. 里〔lǐ〕အထဲ။ အတှငျး
15. 我们〔wǒmen〕ငါတို့။ ကြှနျတျောတို့
16. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ။ လို့ရသညျ
17. 看到〔kàndào〕 တှရေ့သညျ
19. 在〔zài〕... နတေုနျး။ နဆေဲ
20. 玩〔wán〕 ဆော့သညျ။ ကစားသညျ
24. 低头〔dītóu〕 ခေါငျးငုံ့သညျ
26. 一件〔yíjiàn〕တဈခု။ တဈရပျ
28. 的〔de〕တဲ့။ ၏။ ရဲ့
30. 近日〔jìnrì〕အခုတလော။ ယခုရကျမြား
31. 西安〔Xī ān〕ရှီးအနျးမွို့
32. 地铁站〔dìtiězhàn〕 မွအေောကျဘူတာ
35. 一边...一边〔yìbiān...yìbiān〕... ရငျး ... ရငျး
37. 下〔xià〕ဆငျးသညျ။ အောကျ
38. 楼梯〔lóutī〕 လှကေား
41. 脚〔jiǎo〕 ခွထေောကျ
42. 台阶〔táijiē〕 လှကေားထဈ
43. 一脚〔yìjiǎo〕 ခွထေောကျတဈခြာငျး
45. 空〔kōng〕ဗလာ။ ဟာလာဟငျးလငျး
46. 从〔cóng〕မှ။ က
47. 上〔shàng〕တကျသညျ။ အပျေါ
48. 滚了下来〔gǔnle xiàlái〕လိမျ့ကသြှားသညျ
53. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
54. 能〔néng〕... နိုငျသညျ။ လို့ရသညျ
55. 一心二用〔yì xīn èr yòng〕 ခေါငျးတဈလုံးတညျးဖွငျ့ ရအေိုးနှဈလုံးရှကျခွငျး
58. 过马路〔guò mǎlù〕လမျးဖွတျကူးသညျ
59. 时〔shí〕... တဲ့အခြိနျမှာ။ တဲ့အခါမှာ
61. 不要〔búyào〕မ ... နဲ့
62. 虽然〔suīrán〕 ပမေယျ့လညျး
64. 安全〔ān quán〕အန်တရာယျကငျးသညျ
9:45 PM C-Sentence , Chinese
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အရောင်းအဝယ်အတွက် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာ အပြန်အလှန် ပြောဆိုကြတဲ့ စကားပြောပုံစံ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
☞ Zhège chǎnpǐn jiàgé tài gāo le.
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ကျာ့ကဲယ် ထိုက်ကောင်းလဲာ့
☞ ဒီကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်း မြင့်လွန်းတယ်။
☞ Yàoshì pīfā de huà, hái kěyǐ shāngliáng.
☞ ယောက်ရှစ်h ဖျီးဖားfတဲ့ဟွာ့ ဟိုင်ခဲယ်းယီ ရှန်းh(င်)လျန်(င်)
☞ လက်ကားဝယ်ရင် ဈေးနှုန်းညှိလို့ ရသေးတယ်။
☞ Dàliàng gòumǎi, kěyǐ piányi diǎn ma?
☞ တာ့လျန့်(င်) ကို့မိုင် ခဲယ်းယီ ဖြန်ယိတျန်မား
☞ များများဝယ်ရင် ဈေးထပ်လျှော့ပေးမလား။
4. 还可以优惠 5%。
☞ Hái kěyǐ yōuhuì bǎi fēnzhī wǔ.
☞ ဟိုင်ခဲယ်းယီ ယိုးဟွေ့ ပိုင်ဖဲင်းfကျီးhဝူ
☞ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်လျှော့ပေးနိုင်ပါတယ်။
☞ Zhège chǎnpǐn wèishénme jiàgé nàme dī?
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ကျာ့ကဲယ် နာ့မဲာ့တီး
☞ ဒီကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်း ဘာလို့ ဒီလောက်နိမ့်တာလဲ။
☞ Pǐnzhì jiào dī, jiàgé yě bǐjiào piányi.
☞ ဖျင်ကျိh ကျောက်တီး ကျာ့ကဲယ်းယယ် ပီကျောက် ဖြန်ယိ
☞ အရည်အသွေး သိပ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာပါတယ်။
☞ Huìlǜ róngyì biàndòng, fùkuǎn shí qǐng shǐyòng měiyuán.
☞ ဟွေ့လွိ ရုံr(င်)ယိ ပြန့်တုံ့(င်) ဖုfခွမ်ရှီh ချင်း(င်) ရှီhယုံ့(င်) မေယွမ်
☞ ငွေလဲနှုန်းက အမြဲတမ်း ပြောင်းနေတယ်၊ ငွေပေးရင် ဒေါ်လာနဲ့ပေးပါ။
☞ Kěyǐ de.
☞ Nǐmen kěyǐ zài chǎnpǐn dàodá hòu shítiān zhīnèi fùkuǎn ma?
☞ နီမဲင် ခဲယ်းယီ ဇိုက်zချန်းhဖျင် တောက်တာဟို့ ရှီhထျန်းကျီးhနေ့ ဖုfခွမ်မား
☞ ခင်ဗျားတို့က ကုန်ပစ္စည်းရောက်ပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း ငွေချေနိုင်မလား။
☞ Bù xíng, zuìshǎo shì èrshí tiān.
☞ ပုရှင်(င်) ဇွေ့zရှောင်h ရှစ်h အဲာ့rရှီhထျန်း
☞ မချေနိုင်ပါဘူး၊ အမြန်ဆုံး ရက် ၂၀ ရှိမှ ပေးနိုင်ပါမယ်။
☞ Kěyǐ jiàngjià duōshao?
☞ ခဲယ်းယီ ကျန့်(င်)ကျာ့ တောရှောင်h
☞ ဈေး ဘယ်လောက်လျှော့နိုင်သလဲ။
☞ Kěyǐ zài piányi ma?
☞ ခဲယ်းယီ ဇိုက်zဖြန်ယိမား
☞ နောက်ထပ် လျှော့နိုင်သေးလား။
☞ Kěyǐ zài gěi wǒ yícì gūjiàdān ma?
☞ ခဲယ်းယီ ဇိုက်zကေးဝေါ် ယီဆစ် ကူးကျာ့တန်းမား
☞ ခန့်မှန်းဈေးနှုန်းစာရင်းကို နောက်ထပ် ပေးနိုင်သေးလား။
☞ Chǎnpǐn jiǎonà kěyǐ tízǎo ma?
☞ ချန်းhဖျင်ကျောင်နာ့ ခဲယ်းယီ ထီးဇောင်zမား
☞ ကုန်ပေး(အပ်)မယ့်ရက် ရှေ့တိုးနိုင်မလား။
☞ Kěyǐ zhīfù miǎnbì ma?
☞ ခဲယ်းယီ ကျီးhဖုf မြန်ပိမား
☞ မြန်မာငွေနဲ့ ပေးလို့ရသလား။
ထုတျကုနျပစ်စညျး အရောငျးအဝယျအတှကျ ဈေးနှုနျးညှိနှိုငျးတဲ့အခါမှာ အပွနျအလှနျ ပွောဆိုကွတဲ့ စကားပွောပုံစံ နမူနာဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ကြာ့ကဲယျ ထိုကျကောငျးလဲာ့
☞ ဒီကုနျပစ်စညျး ဈေးနှုနျး မွငျ့လှနျးတယျ။
☞ ယောကျရှဈh ဖြီးဖားfတဲ့ဟှာ့ ဟိုငျခဲယျးယီ ရှနျးh(ငျ)လနျြ(ငျ)
☞ လကျကားဝယျရငျ ဈေးနှုနျးညှိလို့ ရသေးတယျ။
☞ တာ့လနျြ့(ငျ) ကို့မိုငျ ခဲယျးယီ ဖွနျယိတနျြမား
☞ မြားမြားဝယျရငျ ဈေးထပျလြှော့ပေးမလား။
☞ ဟိုငျခဲယျးယီ ယိုးဟှေ့ ပိုငျဖဲငျးfကြီးhဝူ
☞ ၅ ရာခိုငျနှုနျး ထပျလြှော့ပေးနိုငျပါတယျ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ကြာ့ကဲယျ နာ့မဲာ့တီး
☞ ဒီကုနျပစ်စညျး ဈေးနှုနျး ဘာလို့ ဒီလောကျနိမျ့တာလဲ။
☞ ဖငျြကြိh ကြောကျတီး ကြာ့ကဲယျးယယျ ပီကြောကျ ဖွနျယိ
☞ အရညျအသှေး သိပျမကောငျးပါဘူး၊ ဒါကွောငျ့ ဈေးနှုနျးလညျး သကျသာပါတယျ။
☞ ဟှလှေိ့ ရုံr(ငျ)ယိ ပွနျ့တုံ့(ငျ) ဖုfခှမျရှီh ခငျြး(ငျ) ရှီhယုံ့(ငျ) မယှေမျ
☞ ငှလေဲနှုနျးက အမွဲတမျး ပွောငျးနတေယျ၊ ငှပေေးရငျ ဒျေါလာနဲ့ပေးပါ။
☞ နီမဲငျ ခဲယျးယီ ဇိုကျzခနျြးhဖငျြ တောကျတာဟို့ ရှီhထနျြးကြီးhနေ့ ဖုfခှမျမား
☞ ခငျဗြားတို့က ကုနျပစ်စညျးရောကျပွီး ၁၀ ရကျအတှငျး ငှခေနြေိုငျမလား။
☞ ပုရှငျ(ငျ) ဇှေ့zရှောငျh ရှဈh အဲာ့rရှီhထနျြး
☞ မခနြေိုငျပါဘူး၊ အမွနျဆုံး ရကျ ၂၀ ရှိမှ ပေးနိုငျပါမယျ။
☞ ခဲယျးယီ ကနျြ့(ငျ)ကြာ့ တောရှောငျh
☞ ဈေး ဘယျလောကျလြှော့နိုငျသလဲ။
☞ ခဲယျးယီ ဇိုကျzဖွနျယိမား
☞ နောကျထပျ လြှော့နိုငျသေးလား။
☞ ခဲယျးယီ ဇိုကျzကေးဝျေါ ယီဆဈ ကူးကြာ့တနျးမား
☞ ခနျ့မှနျးဈေးနှုနျးစာရငျးကို နောကျထပျ ပေးနိုငျသေးလား။
☞ ခနျြးhဖငျြကြောငျနာ့ ခဲယျးယီ ထီးဇောငျzမား
☞ ကုနျပေး(အပျ)မယျ့ရကျ ရှတေို့းနိုငျမလား။
☞ ခဲယျးယီ ကြီးhဖုf မွနျပိမား
☞ မွနျမာငှနေဲ့ ပေးလို့ရသလား။
ကုန်ပစ္စည်း၏ ထူးခြားချက်များကို ရှင်းပြပြောဆိုခြင်း။
9:39 PM C-Sentence , Chinese
မိမိတို့ စက်ရုံရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တဖက် ကုမ္ပဏီကို ရောင်းချဖို့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို ရှင်းပြတဲ့အခါမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
☞ Guì gōngsī de chǎnpǐn yǒu shénme tèsè?
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ချန်းhဖျင် ယို ရှဲhမဲာ့ထဲ့စဲ့
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းက ဘာထူးခြားချက်ရှိသလဲ။
☞ Wùměi jiàlián shì tā de zhǔyào tèsè.
☞ ဝုမေကျာ့လျန် ရှစ်h ထားတဲ့ ကျူhယောက်ထဲ့စဲ့
☞ ဈေးနှုန်းသက်သာ ပစ္စည်းကောင်းတာဟာ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ပါပဲ။
☞ Gēn yǐwǎng de chǎnpǐn yǒu shénme bù yíyàng?
☞ ကဲင်းယီးဝမ်(င်)တဲ့ ချန်းhဖျင် ယို ရှဲhမဲာ့ ပုယီယန့်(င်)
☞ အရင်က ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဘာကွာသလဲ။
☞ Tā de gōngnéng gèng qíquán le.
☞ ထားတဲ့ ကုံး(င်)နဲင်(င်) ကဲင့်(င်)ချီးချွမ်လဲာ့
☞ သူ့မှာ function တွေ ပိုပြည့်စုံပါတယ်။
☞ Guì gōngsī de chǎnpǐn bǎozhèngqī yǒu duōcháng?
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ချန်းhဖျင် ပေါင်ကျဲင့်h(င်)ချီး ယို တောချန်h(င်)
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေးကို ဘယ်နှစ်နှစ် အာမခံမလဲ။
☞ Sān nián.
☞ ၃ နှစ်ပါ။
☞ Zài nǎlǐ jìnxíng shèjì gēn zhìzào?
☞ ဇိုက်zနားလီ ကျင့်ရှင်(င်) ရှဲ့hကျိ ကဲင်း ကျိhဇောက်z
☞ ဘယ်နေရာမှာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်တာလဲ။
☞ Quánbù dōu shì zài běn gōngsī jìnxíng.
☞ ချွမ်ပုတိုးရှစ်h ဇိုက်zပဲင်ကုံး(င်)စီး ကျင့်ရှင်(င်)
☞ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှာပဲ လုပ်တာပါ။
☞ Xiāo zài guówài shí huì pèihé duìfāng de biāozhǔn guīgé ma?
☞ ရှောင်းဇိုက်zကော်ဝိုက်ရှီh ဟွေ့ဖေ့ဟဲယ် တွေ့ဖန်းf(င်)တဲ့ ပြောင်းကျွင်hကွေးဟဲယ်မား
☞ ပြည်ပကို ရောင်းမယ်ဆိုရင် တဖက်က ပေးထားတဲ့ စံအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပေးမလား။
☞ Quánbù dōu ànzhào guójì biāozhǔn lái shēngchǎn.
☞ ချွမ်ပုတိုး အန့်ကျောက်h ကော်ကျိပြောင်းကျွင်h လိုင် ရှဲင်းh(င်)ချန်h
☞ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာစံအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
☞ Yǒu duōshao gùdìng kèhù?
☞ ယိုတောရှောင်h ကွေးတင့်(င်) ခဲါ့ဟု
☞ ဖောက်သည် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
☞ Nǐmen gōngsī de chǎnpǐn kěyǐ gǎi chéng wǒguó de biāozhǔn guīgé ma?
☞ နီမဲင်ကုံး(င်)စီးတဲ့ ချန်းhဖျင် ခဲယ်းယီး ကိုင်ချဲင်h(င်) ဝေါ်ကော်တဲ့ ပြောင်းကျွင်hကွေးကဲယ်မား
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုန်ပစ္စည်းကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက စံအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မလား။
☞ Zài guówài yǒu shēngchǎn ma?
☞ ဇိုက်zကော်ဝိုက်ယို ရှဲင်းh(င်)ချန်hမား
☞ ပြည်ပမှာလည်း ထုတ်လုပ်သလား။
☞ Nǐmen de chǎnpǐn dōu ná dào zhuānlì le ma?
☞ နီမဲင်တဲ့ ချန်းhဖျင်တိုး နာတောက် ကျွမ်းhလိလဲာ့မား
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးက မူပိုင်ခွင့် ရှိကြသလား။
☞ Nǐmen de chǎnpǐn yìnián yǒu duōshao xiāoshòu’é?
☞ နီမဲင်တဲ့ ချန်းhဖျင် ယိနျန်းယို တောရှောင်h ရှောင်းရှို့hအဲယ်
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုန်ပစ္စည်း တစ်နှစ်မှာ အရောင်းပမာဏက ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ကုနျပစ်စညျး၏ ထူးခွားခကျြမြားကို ရှငျးပွပွောဆိုခွငျး။
မိမိတို့ စကျရုံရဲ့ ထုတျကုနျပစ်စညျးတှကေို တဖကျ ကုမ်ပဏီကို ရောငျးခဖြို့အတှကျ ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ထူးခွားခကျြတှကေို ရှငျးပွတဲ့အခါမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ နမူနာဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ယို ရှဲhမဲာ့ထဲ့စဲ့
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ ကုနျပစ်စညျးက ဘာထူးခွားခကျြရှိသလဲ။
☞ ဝုမကြော့လနျြ ရှဈh ထားတဲ့ ကြူhယောကျထဲ့စဲ့
☞ ဈေးနှုနျးသကျသာ ပစ်စညျးကောငျးတာဟာ သူ့ရဲ့ ထူးခွားခကျြပါပဲ။
☞ ကဲငျးယီးဝမျ(ငျ)တဲ့ ခနျြးhဖငျြ ယို ရှဲhမဲာ့ ပုယီယနျ့(ငျ)
☞ အရငျက ကုနျပစ်စညျးတှနေဲ့ ဘာကှာသလဲ။
☞ ထားတဲ့ ကုံး(ငျ)နဲငျ(ငျ) ကဲငျ့(ငျ)ခြီးခြှမျလဲာ့
☞ သူ့မှာ function တှေ ပိုပွညျ့စုံပါတယျ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ပေါငျကြဲငျ့h(ငျ)ခြီး ယို တောခနျြh(ငျ)
☞ ခငျဗြားတို့ ကုနျပစ်စညျး အရညျအသှေးကို ဘယျနှဈနှဈ အာမခံမလဲ။
☞ ၃ နှဈပါ။
☞ ဇိုကျzနားလီ ကငျြ့ရှငျ(ငျ) ရှဲ့hကြိ ကဲငျး ကြိhဇောကျz
☞ ဘယျနရောမှာ ဒီဇိုငျးဆှဲပွီး ထုတျလုပျတာလဲ။
☞ ခြှမျပုတိုးရှဈh ဇိုကျzပဲငျကုံး(ငျ)စီး ကငျြ့ရှငျ(ငျ)
☞ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီမှာပဲ လုပျတာပါ။
☞ ရှောငျးဇိုကျzကျောဝိုကျရှီh ဟှဖေ့ဟေဲ့ယျ တှဖေ့နျးf(ငျ)တဲ့ ပွောငျးကြှငျhကှေးဟဲယျမား
☞ ပွညျပကို ရောငျးမယျဆိုရငျ တဖကျက ပေးထားတဲ့ စံအတိုငျး ထုတျလုပျပေးမလား။
☞ ခြှမျပုတိုး အနျ့ကြောကျh ကျောကြိပွောငျးကြှငျh လိုငျ ရှဲငျးh(ငျ)ခနျြh
☞ အားလုံးကို နိုငျငံတကာစံအတိုငျး ထုတျလုပျပါတယျ။
☞ ယိုတောရှောငျh ကှေးတငျ့(ငျ) ခဲါ့ဟု
☞ ဖောကျသညျ ဘယျလောကျရှိသလဲ။
☞ နီမဲငျကုံး(ငျ)စီးတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ခဲယျးယီး ကိုငျခြဲငျh(ငျ) ဝျေါကျောတဲ့ ပွောငျးကြှငျhကှေးကဲယျမား
☞ ခငျဗြားတို့ ကုနျပစ်စညျးကို ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံက စံအတိုငျး ထုတျလုပျပေးနိုငျမလား။
☞ ဇိုကျzကျောဝိုကျယို ရှဲငျးh(ငျ)ခနျြhမား
☞ ပွညျပမှာလညျး ထုတျလုပျသလား။
☞ နီမဲငျတဲ့ ခနျြးhဖငျြတိုး နာတောကျ ကြှမျးhလိလဲာ့မား
☞ ခငျဗြားတို့ ကုနျပစ်စညျးအားလုံးက မူပိုငျခှငျ့ ရှိကွသလား။
☞ နီမဲငျတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ယိနနျြးယို တောရှောငျh ရှောငျးရှို့hအဲယျ
☞ ခငျဗြားတို့ ကုနျပစ်စညျး တဈနှဈမှာ အရောငျးပမာဏက ဘယျလောကျရှိသလဲ။
စက်ရုံသို့ သွားရောက် လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း။
9:30 PM C-Sentence , Chinese
မိမိစက်ရုံကို တဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေက လာရောက်လေ့လာတာဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိက သူတပါးစက်ရုံကို သွားရောက်လေ့လာရင်ဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန် ပြောဆိုလေ့ရှိတဲ့ စကားစုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Qǐng chuānshang gōngzuòfú, zhè shì wèishēng shang de yāoqiú.
☞ ချင်(င်)ချွမ်းhရှန့်h(င်) ကုံး(င်)ဇော့zဖူf ကျဲ့hရှစ်h ဝေ့ရှဲင်းh(င်)ရှန့်h(င်)တဲ့ ယောင်းချို
☞ သန့်ရှင်းရေး လိုအပ်ချက်အရ ယူနီဖောင်းကို ဝတ်ထားပါ။
☞ Guì gōngsī de guīmó yǒu duōdà?
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ကွေးမော် ယိုတောတာ့
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီက ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ။
☞ Wǒmen gōngsī yǒu yuángōng liǎngqiān rén.
☞ ဝေါ်မဲင်ကုံး(င်)စီး ယို ယွမ်းကုံး(င်) လျန်(င်)ချန်းရဲင်r
☞ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၀၀၀ ရှိပါတယ်။
☞ Guì gōngsī de shìchǎng zhànyǒulǜ shì duōshao?
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ရှစ်hချန်h(င်) ကျန့်hယိုလွိ ရှစ်hတောရှောင်h
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဈေးကွက်ရှယ်ယာက ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
☞ Nà yíbùfēn wǒ bù shúxī.
☞ နာ့ ယီပုဖဲင်းf ဝေါ်ပုရှူhရှီး
☞ ဒီကဏ္ဍကို ကျွန်တော် သိပ်မသိပါဘူး။
☞ Zhèxiē chǎnpǐn yǒu xiànhuò me?
☞ ကျဲ့hရှဲချန်းhဖျင် ယို ရှန့်ဟော့မား
☞ ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေက အခုချက်ချင်း ရနိုင်မလား။
☞ Nǐ kě bù kěyǐ gěi wǒ yìxiē chǎnpǐn?
☞ နီးခဲယ်ပုခဲယ်းယီ ကေးဝေါ် ယိရှဲချန်းhဖျင်
☞ နမူနာတချို့ ပြပေးနိုင်မလား။
☞ Kěyǐ de, huítóu wǒ ràng mìshū bāng nín bàn.
☞ ခဲယ်းယီတဲ့ ဟွေးထို ဝေါ်ရန့်r(င်)မိရှူးh ပန်း(င်)နင်ပန့်
☞ ပြပေးနိုင်ပါတယ်၊ ပြီးရင် အတွင်းရေးမှူးကို လုပ်ပေးခိုင်းပါ့မယ်။
☞ Nín juéde wǒmen de gōngchǎng zěnyàng?
☞ နင်ကျွယ်တဲ့ ဝေါ်မဲင်တဲ့ ကုံး(င်)ချန်h(င်) ဇဲင်zယန့်(င်)
☞ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
☞ Fēicháng hǎo, hěn xiàndàihuà.
☞ ဖေးfချန်းh(င်)ဟောင် ဟဲင်ရှန့်တိုက်ဟွာ့
☞ အရမ်း ကောင်းပါတယ်၊ တော်တော် ခေတ်မီပါတယ်။
☞ Nín zǒngde yìnxiàng rúhé?
☞ နင်း ဇုံz(င်)တဲ့ ယင့်ရှန့်(င်) ရူးrဟဲယ်
☞ ခြုံပြီးပြောရရင် ခင်ဗျား ဘယ်လိုထင်သလဲ။
☞ Nǐmen jīngyíng yèwù de fāngfǎ gěi wǒ liúxià le hěn shēn de yìnxiàng.
☞ နီမဲင် ကျင်း(င်)ယင်(င်)ယဲ့ဝုတဲ့ ဖန်းf(င်)ဖာf ကေးဝေါ် လျိုရှာ့လဲာ့ ဟဲင်ရှဲင်းhတဲ့ ယင့်ရှန့်(င်)
☞ ခင်ဗျားတို့ ဆောင်ရွက်ပုံကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ တော်တော် သဘောကျပါတယ်။
☞ Nǐmen yòng shénme bànfǎ lái kòngzhì zhìliàng ne?
☞ နီမဲင်ယုံ့(င်) ရှဲhမဲာ့ပန့်ဖာf လိုင်ခုံ့(င်)ကျိh ကျိhလျန့်(င်)နဲ
☞ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားတာလဲ။
☞ Suǒyǒu chǎnpǐn chūchǎng qián bìxū yào jīngguò yángé jiǎnchá.
☞ စောယိုချန်းhဖျင် ချူးhချန်h(င်)ချန် ပိရွှီးယောက် ကျင်း(င်)ကော့ ယန်းကဲယ်ကျန်ချာh
☞ ကုန်ပစ္စည်း အားလုံးကို စက်ရုံက မထွက်ခင် တိတိကျကျ စစ်ဆေးပါတယ်။
☞ Huānyíng dào wǒmen gōngchǎng lái.
☞ ဟွမ်းယင်(င်) တောက်ဝေါ်မဲင် ကုံး(င်)ချန်h(င်)လိုင်
☞ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံကို ရောက်လာတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။
☞ Wǒ yìzhí dōu pànwàng zhe cānguān guì chǎng.
☞ ဝေါ် ယိကျီhတိုး ဖန့်ဝမ့်(င်)ကျယ်h ဆန်းကွမ်း ကွေ့ချန်h(င်)
☞ ခင်ဗျားတို့က စက်ရုံကို လာရောက်လေ့လာဖို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်နေတာ ကြာပါပြီ။
☞ Cānguān hòu nín huì duì wǒmen de chǎnpǐn yǒu gèngshēn de liǎojiě.
☞ ဆန်းကွမ်းဟို့ နင်ဟွေ့ တွေ့ဝေါ်မဲင်တဲ့ချန်းhဖျင် ယို ကဲင့်(င်)ရှဲင်းhတဲ့ လျောင်းကျယ်
☞ လေ့လာကြည့်ရှုပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ် ခင်ဗျား ပိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
☞ Wǒ xīwàng zhècì lái cānguān méiyǒu gěi nǐmen zēngtiān tàiduō de máfan.
☞ ဝေါ်ရှီးဝမ့်(င်) ကျဲ့hဆစ် လိုင်ဆန်းကွမ်း မေးယို ကေးနီမဲင် ဇဲင်းz(င်)ထျန်း ထိုက်တောတဲ့မားဖန်f
☞ ဒီတစ်ခါ လေ့လာကြည့်ရှုတာဟာ ခင်ဗျားတို့ကို အလုပ်သိပ်မရှုပ်စေဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
☞ Wǒmen shíxíng de gōngzuò shì liǎngbāndào.
☞ ဝေါ်မဲင် ရှီးhရှင်(င်)တဲ့ ကုံး(င်)ဇော့z ရှစ်h လျန်(င်)ပန်းတောက်
☞ ကျွန်တော်တို့က အလုပ်သမား နှစ်ဆိုင်းခွဲပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါတယ်။
☞ Jiù zhìliàng ér yán, méiyǒu rènhé chǎngjiā néng hé wǒmen xiāngbǐ.
☞ ကျို့ကျိhလျန့်(င်) အဲယ်းrယန် မေးယိုရဲင့်rဟဲယ် ချန်h(င်)ကျားနဲင်(င်) ဟဲယ်းဝေါ်မဲင် ရှန်း(င်)ပီ
☞ အရည်အသွေးနယ်ပယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို မီတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။
☞ Jīntiān de huódòng ānpái yǐ jiéshù, wǒ xiǎng wǒmen de chē yǐ zài děnghòu.
☞ ကျင်းထျန်းတဲ့ ဟော်တုံ့(င်)အန်းဖိုင် ယီကျယ်ရှုh ဝေါရှန်(င်) ဝေါ်မဲင်တဲ့ချဲh ယီဇိုက်zတဲင်(င်)ဟို့
☞ ဒီနေ့အစီအစဉ် ဒီလောက်နဲ့ပဲ ပြီးဆုံးပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ကားက အဆင်သင့် စောင့်နေပြီ ထင်တယ်။
☞ Wǒ jiāng shǐ nín wánquán liǎojiě wǒmen chǎng de dòngzuò qíngkuàng.
☞ ဝေါ်ကျန်း(င်)ရှီhနင် ဝမ်းချွမ်လျောင်းကျယ် ဝေါ်မဲင်ချန်h(င်)တဲ့ တုံ့(င်)ဇော့zချင်(င်)ခွမ့်(င်)
☞ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံရဲ့ ဆောင်ရွက်ပုံအားလုံးကို ခင်ဗျားသိအောင် ကျွန်တော် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
☞ Wǒmen de gōngchǎng zhèngzài kuòjiàn.
☞ ဝေါ်မဲင်တဲ့ ကုံး(င်)ချန်h(င်) ကျဲင့်h(င်)ဇိုက်z ခေါ့ကျန့်
☞ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံကို အခု တိုးချဲ့နေပါတယ်။
☞ Ràng wǒ dài nín dào gōngchǎng sìzhōu kànkan.
☞ ရန့်r(င်)ဝေါ် တိုက်နင် တောက်ကုံး(င်)ချန်h(င်) စွတ်ကျိုးh ခန့်ခန့်
☞ စက်ရုံရဲ့ လေးဘက်လေးတန် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ဖို့ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ပြပေးပါ့မယ်။
☞ Rúguǒ nín juédìng yòng wǒmen de chǎnpǐn, bǎozhèng bú huì shǐ nín shīwàng de.
☞ ရူးrကော် နင်ကျွယ်တင့်(င်)ယုံ့(င်) ဝေါ်မဲင်တဲ့ ချန်းhဖျင် ပေါင်ကျဲင့်h(င်) ပူဟွေ့ ရှီhနင် ရှီးhဝမ့်(င်)တဲ့
☞ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို သုံးလို့ ခင်ဗျားတို့ စိတ်မပျက်စေရပါဘူး၊ ကျွန်တော် အာမခံပါတယ်။
စကျရုံသို့ သှားရောကျ လလေ့ာကွညျ့ရှုခွငျး။
မိမိစကျရုံကို တဖကျလုပျငနျးရှငျတှကေ လာရောကျလလေ့ာတာဖွဈဖွဈ၊ မိမိက သူတပါးစကျရုံကို သှားရောကျလလေ့ာရငျဖွဈဖွဈ အပွနျအလှနျ ပွောဆိုလရှေိ့တဲ့ စကားစုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ခငျြ(ငျ)ခြှမျးhရှနျ့h(ငျ) ကုံး(ငျ)ဇော့zဖူf ကြဲ့hရှဈh ဝရှေဲ့ငျးh(ငျ)ရှနျ့h(ငျ)တဲ့ ယောငျးခြို
☞ သနျ့ရှငျးရေး လိုအပျခကျြအရ ယူနီဖောငျးကို ဝတျထားပါ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ကှေးမျော ယိုတောတာ့
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီက ဘယျလောကျကွီးသလဲ။
☞ ဝျေါမဲငျကုံး(ငျ)စီး ယို ယှမျးကုံး(ငျ) လနျြ(ငျ)ခနျြးရဲငျr
☞ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီက ဝနျထမျးပေါငျး ၂၀၀၀ ရှိပါတယျ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ရှဈhခနျြh(ငျ) ကနျြ့hယိုလှိ ရှဈhတောရှောငျh
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ ဈေးကှကျရှယျယာက ရာခိုငျနှုနျး ဘယျလောကျရှိပါသလဲ။
☞ နာ့ ယီပုဖဲငျးf ဝျေါပုရှူhရှီး
☞ ဒီကဏ်ဍကို ကြှနျတျော သိပျမသိပါဘူး။
☞ ကြဲ့hရှဲခနျြးhဖငျြ ယို ရှနျ့ဟော့မား
☞ ဒီကုနျပစ်စညျးတှကေ အခုခကျြခငျြး ရနိုငျမလား။
☞ နီးခဲယျပုခဲယျးယီ ကေးဝျေါ ယိရှဲခနျြးhဖငျြ
☞ နမူနာတခြို့ ပွပေးနိုငျမလား။
☞ ခဲယျးယီတဲ့ ဟှေးထို ဝျေါရနျ့r(ငျ)မိရှူးh ပနျး(ငျ)နငျပနျ့
☞ ပွပေးနိုငျပါတယျ၊ ပွီးရငျ အတှငျးရေးမှူးကို လုပျပေးခိုငျးပါ့မယျ။
☞ နငျကြှယျတဲ့ ဝျေါမဲငျတဲ့ ကုံး(ငျ)ခနျြh(ငျ) ဇဲငျzယနျ့(ငျ)
☞ ကြှနျတျောတို့ စကျရုံကို ခငျဗြား ဘယျလိုမွငျသလဲ။
☞ ဖေးfခနျြးh(ငျ)ဟောငျ ဟဲငျရှနျ့တိုကျဟှာ့
☞ အရမျး ကောငျးပါတယျ၊ တျောတျော ခတျေမီပါတယျ။
☞ နငျး ဇုံz(ငျ)တဲ့ ယငျ့ရှနျ့(ငျ) ရူးrဟဲယျ
☞ ခွုံပွီးပွောရရငျ ခငျဗြား ဘယျလိုထငျသလဲ။
☞ နီမဲငျ ကငျြး(ငျ)ယငျ(ငျ)ယဲ့ဝုတဲ့ ဖနျးf(ငျ)ဖာf ကေးဝျေါ လြိုရှာ့လဲာ့ ဟဲငျရှဲငျးhတဲ့ ယငျ့ရှနျ့(ငျ)
☞ ခငျဗြားတို့ ဆောငျရှကျပုံကို ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာ တျောတျော သဘောကပြါတယျ။
☞ နီမဲငျယုံ့(ငျ) ရှဲhမဲာ့ပနျ့ဖာf လိုငျခုံ့(ငျ)ကြိh ကြိhလနျြ့(ငျ)နဲ
☞ ခငျဗြားတို့ ဘယျလိုနညျးနဲ့ အရညျအသှေးကို ထိနျးသိမျးထားတာလဲ။
☞ စောယိုခနျြးhဖငျြ ခြူးhခနျြh(ငျ)ခနျြ ပိရှီးယောကျ ကငျြး(ငျ)ကော့ ယနျးကဲယျကနျြခြာh
☞ ကုနျပစ်စညျး အားလုံးကို စကျရုံက မထှကျခငျ တိတိကကြ စဈဆေးပါတယျ။
☞ ဟှမျးယငျ(ငျ) တောကျဝျေါမဲငျ ကုံး(ငျ)ခနျြh(ငျ)လိုငျ
☞ ကြှနျတျောတို့ စကျရုံကို ရောကျလာတာကို ကွိုဆိုပါတယျ။
☞ ဝျေါ ယိကြီhတိုး ဖနျ့ဝမျ့(ငျ)ကယျြh ဆနျးကှမျး ကှခေ့နျြh(ငျ)
☞ ခငျဗြားတို့က စကျရုံကို လာရောကျလလေ့ာဖို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့နတော ကွာပါပွီ။
☞ ဆနျးကှမျးဟို့ နငျဟှေ့ တှဝေ့ျေါမဲငျတဲ့ခနျြးhဖငျြ ယို ကဲငျ့(ငျ)ရှဲငျးhတဲ့ လြောငျးကယျြ
☞ လလေ့ာကွညျ့ရှုပွီးရငျ ကြှနျတျောတို့ ထုတျကုနျပစ်စညျးတှအေပျေါ ခငျဗြား ပိုနားလညျလာပါလိမျ့မယျ။
☞ ဝျေါရှီးဝမျ့(ငျ) ကြဲ့hဆဈ လိုငျဆနျးကှမျး မေးယို ကေးနီမဲငျ ဇဲငျးz(ငျ)ထနျြး ထိုကျတောတဲ့မားဖနျf
☞ ဒီတဈခါ လလေ့ာကွညျ့ရှုတာဟာ ခငျဗြားတို့ကို အလုပျသိပျမရှုပျစဘေူးလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျ ရှီးhရှငျ(ငျ)တဲ့ ကုံး(ငျ)ဇော့z ရှဈh လနျြ(ငျ)ပနျးတောကျ
☞ ကြှနျတျောတို့က အလုပျသမား နှဈဆိုငျးခှဲပွီး အလုပျလုပျတဲ့ စနဈကို ကငျြ့သုံးပါတယျ။
☞ ကြို့ကြိhလနျြ့(ငျ) အဲယျးrယနျ မေးယိုရဲငျ့rဟဲယျ ခနျြh(ငျ)ကြားနဲငျ(ငျ) ဟဲယျးဝျေါမဲငျ ရှနျး(ငျ)ပီ
☞ အရညျအသှေးနယျပယျမှာ ကြှနျတျောတို့ကို မီတဲ့သူ မရှိသလောကျပါပဲ။
☞ ကငျြးထနျြးတဲ့ ဟျောတုံ့(ငျ)အနျးဖိုငျ ယီကယျြရှုh ဝေါရှနျ(ငျ) ဝျေါမဲငျတဲ့ခြဲh ယီဇိုကျzတဲငျ(ငျ)ဟို့
☞ ဒီနအေ့စီအစဉျ ဒီလောကျနဲ့ပဲ ပွီးဆုံးပါပွီ၊ ကြှနျတျောတို့ကားက အဆငျသငျ့ စောငျ့နပွေီ ထငျတယျ။
☞ ဝျေါကနျြး(ငျ)ရှီhနငျ ဝမျးခြှမျလြောငျးကယျြ ဝျေါမဲငျခနျြh(ငျ)တဲ့ တုံ့(ငျ)ဇော့zခငျြ(ငျ)ခှမျ့(ငျ)
☞ ကြှနျတျောတို့ စကျရုံရဲ့ ဆောငျရှကျပုံအားလုံးကို ခငျဗြားသိအောငျ ကြှနျတျော ရှငျးပွပေးပါ့မယျ။
☞ ဝျေါမဲငျတဲ့ ကုံး(ငျ)ခနျြh(ငျ) ကြဲငျ့h(ငျ)ဇိုကျz ခေါ့ကနျြ့
☞ ကြှနျတျောတို့ စကျရုံကို အခု တိုးခြဲ့နပေါတယျ။
☞ ရနျ့r(ငျ)ဝျေါ တိုကျနငျ တောကျကုံး(ငျ)ခနျြh(ငျ) စှတျကြိုးh ခနျ့ခနျ့
☞ စကျရုံရဲ့ လေးဘကျလေးတနျ ပတျဝနျးကငျြကို ကွညျ့ဖို့ ခငျဗြားကို ကြှနျတျော ပွပေးပါ့မယျ။
☞ ရူးrကျော နငျကြှယျတငျ့(ငျ)ယုံ့(ငျ) ဝျေါမဲငျတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ပေါငျကြဲငျ့h(ငျ) ပူဟှေ့ ရှီhနငျ ရှီးhဝမျ့(ငျ)တဲ့
☞ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကုနျပစ်စညျးကို သုံးလို့ ခငျဗြားတို့ စိတျမပကျြစရေပါဘူး၊ ကြှနျတျော အာမခံပါတယျ။
9:10 PM C-Sentence , Chinese
ကုန်ပစ္စည်း နမူနာတွေကို ပို့ပေးဖို့အတွက် ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ စကားပြောပုံစံတွေကို နမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့ စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Mùlù shang de suǒyǒu chǎnpǐn, nǐmen zài duōshao shíjiān nèi kěyǐ gōnghuò?
☞ မုလုရှန့်h(င်)တဲ့ စောယိုချန်းhဖျင် နီမဲင် ဇိုက်z တောရှောင်hရှီhကျန်းနေ့ ခဲယ်းယီ ကုံး(င်)ဟော့
☞ စာရင်းမှာပါတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အားလုံးကို ခင်ဗျားတို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီး ထုတ်ပေးနိုင်မလဲ။
☞ Wǒmen dōu kěyǐ zài duǎn shíjiān nèi gōnghuò de.
☞ ဝေါ်မဲင်တိုး ခဲယ်းယီ ဇိုက်zတွမ်ရှီhကျန်းနေ့ ကုံး(င်)ဟော့တဲ့
☞ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တိုအတွင်း ပစ္စည်း ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
☞ Zhège chǎnpǐn zěnmeyàng?
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ဇဲင်zမဲာ့ယန့်(င်)
☞ ဒီပစ္စည်းက ဘယ်လိုလဲ။
☞ Zhè shì wǒmen jùyǒu dàibiǎoxìng chǎnpǐn de yàngběn.
☞ ကျဲ့hရှစ်h ဝေါ်မဲင် ကျွိယို တိုက်ပြောင်ရှင့်(င်) ချန်းhဖျင်တဲ့ ယန့်(င်)ပဲင်
☞ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ကုန်တွေကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ နမူနာပစ္စည်းပါ။
☞ Zhège chǎnpǐn shì zuì shòu huānyíng de, suǒyǐ jiāohuò qījiān yào huā yíge yuè.
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ရှစ်h ဇွေ့zရှို့hဟွမ်းယင်(င်)တဲ့ စောယီ ကျောင်းဟော့ချီးကျန်း ယောက်ဟွား ယီကဲာ့ယွဲ့
☞ ဒီပစ္စည်းက လူကြိုက်အများဆုံးပါ၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပစ္စည်းရဖို့ တစ်လစောင့်ရမယ်။
☞ Ò, nàme cháng a.
☞ အော့ နာ့မဲာ့ချန်h(င်)အား
☞ သြော်၊ ဒီလောက်ကြာမလား။
☞ Nín néng jì zhège yàngpǐn dào wǒmen gōngsī ma?
☞ နင်းနဲင်(င်)ကျိ ကျဲ့hကဲာ့ယန့်(င်)ဖျင် တောက် ဝေါ်မဲင် ကုံး(င်)စီးမား
☞ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီကို နမူနာ ပို့ပေးနိုင်မလား။
☞ Dāngrán kěyǐ a.
☞ တန်း(င်)ရန်r ခဲယ်းယီအား
☞ Wǒmen gōngsī měinián gēngxīn chǎnpǐn de mùlù yícì.
☞ ဝေါ်မဲင်ကုံး(င်)စီး မေနျန် ကဲင်း(င်)ရှင်း ချန်းhဖျင်တဲ့ မုလု ယီဆစ်
☞ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းက တစ်နှစ်တစ်ခါ အသစ်ထွက်မယ်။
☞ Wǒmen huì pèihé nín de yāoqiú jìshang yàngběn.
☞ ဝေါ်မဲင် ဟွေ့ဖေ့ဟဲယ် နင်တဲ့ယောင်းချို ကျိရှန့်h(င်) ယန့်(င်)ပဲင်
☞ ခင်ဗျားတို့ တောင်းဆိုချက်အရ နမူနာ ပို့ပေးလိုက်မယ်။
☞ Xià yícì wǒ dài yàngběn lái.
☞ ရှာ့ယီဆစ် ဝေါ်တိုက် ယန့်(င်)ပဲင် လိုင်
☞ နောက်တခါလာရင် ကျွန်တော် နမူနာ ယူလာပါ့မယ်။
☞ Zhège chǎnpǐn yǐ jiéshěng néngyuán ér shēnshòu huānyíng.
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ယီ ကျဲရှဲင်h(င်)နဲင်း(င်)ယွမ် အဲယ်r ရှဲင်းhရှို့h ဟွမ်းယင်(င်)
☞ ဒီပစ္စည်းက စွမ်းအင်ကို ချွေတာနိုင်လို့ လူကြိုက်များတယ်။
☞ Zhège chǎnpǐn gēn qítā gōngsī de chǎnpǐn bǐjiào, gèngjiā jīngqiǎo.
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ကဲင်းချီထားကုံး(င်)စီးတဲ့ ချန်းhဖျင် ပီကျောက် ကဲင့်(င်)ကျား ကျင်း(င်)ချောင်
☞ ဒီပစ္စည်းက တခြားကုမ္ပဏီထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ပိုပြီး သေသပ်ပါတယ်။
ကုနျပစ်စညျး နမူနာတှကေို ပို့ပေးဖို့အတှကျ ပွောဆိုဆှေးနှေးကွတဲ့အခါမှာ သုံးလရှေိ့တဲ့ စကားပွောပုံစံတှကေို နမူနာဝါကလြေးတှနေဲ့ စုစညျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ မုလုရှနျ့h(ငျ)တဲ့ စောယိုခနျြးhဖငျြ နီမဲငျ ဇိုကျz တောရှောငျhရှီhကနျြးနေ့ ခဲယျးယီ ကုံး(ငျ)ဟော့
☞ စာရငျးမှာပါတဲ့ ကုနျပစ်စညျး အားလုံးကို ခငျဗြားတို့ အခြိနျဘယျလောကျယူပွီး ထုတျပေးနိုငျမလဲ။
☞ ဝျေါမဲငျတိုး ခဲယျးယီ ဇိုကျzတှမျရှီhကနျြးနေ့ ကုံး(ငျ)ဟော့တဲ့
☞ ကြှနျတျောတို့ အခြိနျတိုအတှငျး ပစ်စညျး ထုတျပေးနိုငျပါတယျ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ဇဲငျzမဲာ့ယနျ့(ငျ)
☞ ဒီပစ်စညျးက ဘယျလိုလဲ။
☞ ကြဲ့hရှဈh ဝျေါမဲငျ ကြှိယို တိုကျပွောငျရှငျ့(ငျ) ခနျြးhဖငျြတဲ့ ယနျ့(ငျ)ပဲငျ
☞ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ ထုတျကုနျတှကေို ကိုယျစားပွုနိုငျတဲ့ နမူနာပစ်စညျးပါ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ရှဈh ဇှေ့zရှို့hဟှမျးယငျ(ငျ)တဲ့ စောယီ ကြောငျးဟော့ခြီးကနျြး ယောကျဟှား ယီကဲာ့ယှဲ့
☞ ဒီပစ်စညျးက လူကွိုကျအမြားဆုံးပါ၊ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ပစ်စညျးရဖို့ တဈလစောငျ့ရမယျ။
☞ အော့ နာ့မဲာ့ခနျြh(ငျ)အား
☞ သွျော၊ ဒီလောကျကွာမလား။
☞ နငျးနဲငျ(ငျ)ကြိ ကြဲ့hကဲာ့ယနျ့(ငျ)ဖငျြ တောကျ ဝျေါမဲငျ ကုံး(ငျ)စီးမား
☞ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီကို နမူနာ ပို့ပေးနိုငျမလား။
☞ တနျး(ငျ)ရနျr ခဲယျးယီအား
☞ ဝျေါမဲငျကုံး(ငျ)စီး မနေနျြ ကဲငျး(ငျ)ရှငျး ခနျြးhဖငျြတဲ့ မုလု ယီဆဈ
☞ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ ထုတျကုနျပစ်စညျးစာရငျးက တဈနှဈတဈခါ အသဈထှကျမယျ။
☞ ဝျေါမဲငျ ဟှဖေ့ဟေဲ့ယျ နငျတဲ့ယောငျးခြို ကြိရှနျ့h(ငျ) ယနျ့(ငျ)ပဲငျ
☞ ခငျဗြားတို့ တောငျးဆိုခကျြအရ နမူနာ ပို့ပေးလိုကျမယျ။
☞ ရှာ့ယီဆဈ ဝျေါတိုကျ ယနျ့(ငျ)ပဲငျ လိုငျ
☞ နောကျတခါလာရငျ ကြှနျတျော နမူနာ ယူလာပါ့မယျ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ယီ ကြဲရှဲငျh(ငျ)နဲငျး(ငျ)ယှမျ အဲယျr ရှဲငျးhရှို့h ဟှမျးယငျ(ငျ)
☞ ဒီပစ်စညျးက စှမျးအငျကို ခြှတောနိုငျလို့ လူကွိုကျမြားတယျ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ကဲငျးခြီထားကုံး(ငျ)စီးတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ပီကြောကျ ကဲငျ့(ငျ)ကြား ကငျြး(ငျ)ခြောငျ
☞ ဒီပစ်စညျးက တခွားကုမ်ပဏီထုတျတဲ့ ပစ်စညျးနဲ့ ယှဉျကွညျ့ရငျ ပိုပွီး သသေပျပါတယျ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(123) 生
9:05 PM C-Draw , Chinese
သင့်ရဲ့ မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိပါသလား။ 生 ဆိုတာက မြန်မာလို “မွေးဖွားသည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(122) 甲
9:01 PM C-Draw , Chinese
“အခွံ” တွေကို တရုတ်လို 甲 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ 甲 ဆိုတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲပုံ အဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျ လေ့လာမှတ်သားကြပါစို့။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(121) 唱
8:57 PM C-Draw , Chinese
唱 ဆိုတာက မြန်မာလို “သီဆိုသည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တချို့က သီချင်းဆိုတာ အရမ်းကောင်းကြတယ်။ သင်ရော သီချင်းဆိုရတာကို ၀ါသနာပါသလား။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(120) 乐
8:53 PM C-Draw , Chinese
သင့်ဘ၀မှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေ အမှတ်တရအနေနဲ့ ရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ 乐 ဆိုတာက “ပျော်ရွှင်သည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(119) 跳
8:49 PM C-Draw , Chinese
တရုတ်စာလုံး 跳 ဆိုတာက မြန်မာလို “ခုန်သည်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်လောက်မြင့်မြင့် ခုန်နိုင်ပါသလဲ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(118) 养
8:44 PM C-Draw , Chinese
“မွေးမြူသည်” ဆိုတာက တရုတ်လို 养 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးရဲ့ ရေးသားပုံ စုတ်ချက်အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာကြပါစို့။
12:22 AM C-Sentence , Chinese
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချကြတဲ့အခါမှာ မိမိကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ထူးခြားချက်၊ အားသာချက်တွေအကြောင်း ရှင်းပြပြောဆိုပုံတွေကို နမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့ စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
☞ Jīntiān yǒu ge hǎo xiāoxi yào gàosù nín.
☞ ကျင်းထျန်း ယိုကဲာ့ ဟောင်ရှောင်းရှိ ယောက်ကောက်စု နင်
☞ ဒီနေ့ ခင်ဗျားကို သတင်းကောင်းတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။
☞ Ò, shì guānyú wǒmen de chǎnpǐn ma?
☞ အော့ ရှစ်h ကွမ်းယွီ ဝေါ်မဲင်တဲ့ ချန်းhဖျင်မား
☞ သြော်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်တာလား။
☞ Zhège chǎnpǐn zài shìchǎng shang zěnmeyàng?
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ဇိုက်zရှစ်hချန်h(င်)ရှန့်h(င်) ဇဲင်zမဲာ့ယန့်(င်)
☞ ဒီကုန်ပစ္စည်းက ဈေးကွက်ထဲမှာ ဘယ်လိုလဲ။
☞ Zhège chǎnpǐn zài shìchǎng shang bèishòu hǎopíng.
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ဇိုက်zရှစ်hချန်h(င်)ရှန့်h(င်) ပေ့ရှို့hဟောင်ဖျင်(င်)
☞ ဈေးကွက်ထဲမှာ လူကြိုက်များပါတယ်။
☞ Kèhù lái dìnghuò duō ma?
☞ ခဲါ့ဟု လိုင် တင့်(င်)ဟော့တောမား
☞ ဖောက်သည်တွေ ပစ္စည်း ကြိုတင်မှာတာ များလား။
☞ Fēicháng duō, hěn duō dōu shì lǎo kèhù le.
☞ ဖေးfချန်h(င်)တော ဟဲင်တော တိုးရှစ်h လောင်ခဲါ့ဟုလဲာ့
☞ တော်တော်များပါတယ်၊ ဖောက်သည်ဟောင်းတွေ ပိုများလာပါတယ်။
☞ Zhège chǎnpǐn dōu yǒu nǎxiē rén xǐhuan?
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် တိုးယို နာရှဲရဲင်rရှီဟွမ်း
☞ ဒီပစ္စည်း ကြိုက်တဲ့လူတွေက ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ။
☞ Zhège chǎnpǐn zhǔyào shì niánqīngrén xǐhuan.
☞ ကျဲ့hကဲာ့ချန်းhဖျင် ကျူhယောက်ရှစ်h နျန်ချင်း(င်)ရဲင်r ရှီဟွမ်း
☞ လူငယ်ပိုင်းတွေက ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။
☞ Mài de hǎo ma?
☞ မိုက်တဲ့ ဟောင်မား
☞ Shì de, fēicháng hǎo mài.
☞ ရှစ်hတဲ့ ဖေးfချန်းh(င်) ဟောင်မိုက်
☞ ဟုတ်ပါတယ်၊ သိပ်ရောင်းကောင်းပါတယ်။
☞ Qǐng nǐ xiān kànkan wǒmen zhǎnchū de diànnǎo hǎo ma?
☞ ချင်း(င်)နီ ရှန်းခန့်ခန့် ဝေါ်မဲင်ကျန်hချူးhတဲ့ တျန့်နောင် ဟောင်မား
☞ ကျွန်တော်တို့ ပြထားတဲ့ ကွန်ပျူတာကို အရင် ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
☞ Hé tónglèi chǎnpǐn xiāngbǐ, tā yǒu shénme yōushì?
☞ ဟဲယ် ထုံ(င်)လေ့ချန်းhဖျင် ရှမ်း(င်)ပီ ထားယို ရှဲhမဲာ့ ယိုးရှစ်h
☞ တခြား မျိုးတူပစ္စည်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာအားသာချက် ရှိပါသလဲ။
☞ Zhè shì wǒmen de zuìxīn chǎnpǐn, jīnnián xiàjì cái tóufàng shìchǎng.
☞ ကျဲ့hရှစ်h ဝေါ်မဲင်တဲ့ ဇွေ့ရှင်း ချန်းhဖျင် ကျင်းနျန် ရှာ့ကျိဆိုင် ထိုဖန့်f(င်) ရှစ်hချန်h(င်)
☞ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် အသစ်ပါ၊ ဒီနှစ်နွေရာသီမှ ဈေးကွက်ပေါ် ရောက်လာတာပါ။
☞ Hé qítā chǎnpǐn xiāngbǐ, tā tǐjī xiǎo, zhòngliàng qīng, cāozuò gèng róngyì, gèng zhòngyào de shì tā jiénéng.
☞ ဟဲယ် ချီထားချန်းhဖျင် ရှမ်း(င်)ပီ ထား ထီကျီးရှောင် ကျုံ့h(င်)လျန့်(င်)ချင်း(င်) ဆောင်းဇော့z ကဲင့်(င်)ရုံr(င်)ယိ ကဲင့်(င်)ကျုံ့h(င်)ယောက်တဲ့ရှစ်h ထား ကျဲနဲင်(င်)
☞ တခြား ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ထုထည်သေးတယ်၊ ပေါ့ပါးတယ်၊ သုံးလို့လွယ်တယ်၊ အရေးကြီးတာက စွမ်းအင်ကို ချွေတာပါတယ်။
☞ Tā de chǐcùn hé zhòngliàng fēnbié shì duōshao?
☞ ထားတဲ့ချီhဆွင့် ဟဲယ် ကျုံ့h(င်)လျန့်(င်) ဖဲင်းfပြယ် ရှစ်h တောရှောင်h
☞ သူ့အရွယ်အစားနဲ့ အလေးချိန်က ဘယ်လောက်လဲ။
☞ Tā de kuǎnshì piàoliang, yánsè xiānyàn, zuògōng yīliú.
☞ ထားတဲ့ခွမ်ရှစ်h ဖျောက်လျန့်(င်) ယန်စဲ့ ရှန်းယန့် ဇော့zကုံး(င်) ယီးလျို
☞ သူက စတိုင်လည်း လှတယ်၊ အရောင်လည်း တောက်တယ်၊ လက်ရာလည်း သပ်ရပ်ပါတယ်။
☞ Tāmen zài Zhōngguó hé ōuměi guójiā dàshòu gùkè qīnglài.
☞ ထားမဲင် ဇိုက်zကျုံးh(င်)ကော် ဟဲယ် အိုးမေကော်ကျား တာ့ရှို့h ကုခဲါ့ ချင်း(င်)လိုက်
☞ ဒီပစ္စည်းကို တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဥရောပတိုက်၊ အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူကြိုက်များပါတယ်။
☞ Tā shífēn chàngxiāo, zài guójì shang shòudào pǔbiàn huānyíng.
☞ ထား ရှီhဖဲင်းf ချန့်h(င်)ရှောင်း ဇိုက်zကော်ကျိရှန့်h(င်) ရှို့hတောက် ဖူပြန့်ဟွမ်းယင်(င်)
☞ ဒီပစ္စည်းက အင်မတန် ရောင်းကောင်းတယ်၊ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ လူကြိုက်များတယ်။
☞ Wǒmen kěyǐ ànzhào nǐmen de yàngpǐn jìnxíng shēngchǎn, yǐbiàn mǎnzú nǐfāng kèhù de yāoqiú.
☞ ဝေါ်မဲင် ခဲယ်းယီအန့်ကျောက်h နီမဲင်တဲ့ ယန့်(င်)ဖျင် ကျင့်ရှင်(င်) ရှဲင်းh(င်)ချန်h ယီပြန့် မန်ဇူz နီဖန်းf(င်) ခဲါ့ဟုတဲ့ ယောင်းချို
☞ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စွမ်းနိုင်ဖို့ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ နမူနာပုံစံအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
☞ Nǐmen de chǎnpǐn yǒu shénme yōudiǎn.
☞ နီမဲင်တဲ့ ချန်းhဖျင် ယို ရှဲhမဲာ့ယိုးတျန်
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုန်ပစ္စည်းတွေက ဘာအားသာချက်တွေ ရှိပါသလဲ။
ထုတျကုနျပစ်စညျးတှကေို ရောငျးခကြွတဲ့အခါမှာ မိမိကုနျပစ်စညျးရဲ့ ထူးခွားခကျြ၊ အားသာခကျြတှအေကွောငျး ရှငျးပွပွောဆိုပုံတှကေို နမူနာဝါကလြေးတှနေဲ့ စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
☞ ကငျြးထနျြး ယိုကဲာ့ ဟောငျရှောငျးရှိ ယောကျကောကျစု နငျ
☞ ဒီနေ့ ခငျဗြားကို သတငျးကောငျးတဈခု ပွောပွခငျြပါတယျ။
☞ အော့ ရှဈh ကှမျးယှီ ဝျေါမဲငျတဲ့ ခနျြးhဖငျြမား
☞ သွျော၊ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ထုတျကုနျပစ်စညျးနဲ့ ပတျသကျတာလား။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ဇိုကျzရှဈhခနျြh(ငျ)ရှနျ့h(ငျ) ဇဲငျzမဲာ့ယနျ့(ငျ)
☞ ဒီကုနျပစ်စညျးက ဈေးကှကျထဲမှာ ဘယျလိုလဲ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ဇိုကျzရှဈhခနျြh(ငျ)ရှနျ့h(ငျ) ပရှေို့hဟောငျဖငျြ(ငျ)
☞ ဈေးကှကျထဲမှာ လူကွိုကျမြားပါတယျ။
☞ ခဲါ့ဟု လိုငျ တငျ့(ငျ)ဟော့တောမား
☞ ဖောကျသညျတှေ ပစ်စညျး ကွိုတငျမှာတာ မြားလား။
☞ ဖေးfခနျြh(ငျ)တော ဟဲငျတော တိုးရှဈh လောငျခဲါ့ဟုလဲာ့
☞ တျောတျောမြားပါတယျ၊ ဖောကျသညျဟောငျးတှေ ပိုမြားလာပါတယျ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ တိုးယို နာရှဲရဲငျrရှီဟှမျး
☞ ဒီပစ်စညျး ကွိုကျတဲ့လူတှကေ ဘယျလိုလူမြိုးတှလေဲ။
☞ ကြဲ့hကဲာ့ခနျြးhဖငျြ ကြူhယောကျရှဈh နနျြခငျြး(ငျ)ရဲငျr ရှီဟှမျး
☞ လူငယျပိုငျးတှကေ ပိုကွိုကျကွပါတယျ။
☞ မိုကျတဲ့ ဟောငျမား
☞ ရှဈhတဲ့ ဖေးfခနျြးh(ငျ) ဟောငျမိုကျ
☞ ဟုတျပါတယျ၊ သိပျရောငျးကောငျးပါတယျ။
☞ ခငျြး(ငျ)နီ ရှနျးခနျ့ခနျ့ ဝျေါမဲငျကနျြhခြူးhတဲ့ တနျြ့နောငျ ဟောငျမား
☞ ကြှနျတျောတို့ ပွထားတဲ့ ကှနျပြူတာကို အရငျ ကွညျ့လိုကျပါခငျဗြာ။
☞ ဟဲယျ ထုံ(ငျ)လခေ့နျြးhဖငျြ ရှမျး(ငျ)ပီ ထားယို ရှဲhမဲာ့ ယိုးရှဈh
☞ တခွား မြိုးတူပစ်စညျးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ ဘာအားသာခကျြ ရှိပါသလဲ။
☞ ကြဲ့hရှဈh ဝျေါမဲငျတဲ့ ဇှရှေ့ငျး ခနျြးhဖငျြ ကငျြးနနျြ ရှာ့ကြိဆိုငျ ထိုဖနျ့f(ငျ) ရှဈhခနျြh(ငျ)
☞ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ထုတျကုနျ အသဈပါ၊ ဒီနှဈနှရောသီမှ ဈေးကှကျပျေါ ရောကျလာတာပါ။
☞ ဟဲယျ ခြီထားခနျြးhဖငျြ ရှမျး(ငျ)ပီ ထား ထီကြီးရှောငျ ကြုံ့h(ငျ)လနျြ့(ငျ)ခငျြး(ငျ) ဆောငျးဇော့z ကဲငျ့(ငျ)ရုံr(ငျ)ယိ ကဲငျ့(ငျ)ကြုံ့h(ငျ)ယောကျတဲ့ရှဈh ထား ကြဲနဲငျ(ငျ)
☞ တခွား ကုနျပစ်စညျးတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရငျ ထုထညျသေးတယျ၊ ပေါ့ပါးတယျ၊ သုံးလို့လှယျတယျ၊ အရေးကွီးတာက စှမျးအငျကို ခြှတောပါတယျ။
☞ ထားတဲ့ခြီhဆှငျ့ ဟဲယျ ကြုံ့h(ငျ)လနျြ့(ငျ) ဖဲငျးfပွယျ ရှဈh တောရှောငျh
☞ သူ့အရှယျအစားနဲ့ အလေးခြိနျက ဘယျလောကျလဲ။
☞ ထားတဲ့ခှမျရှဈh ဖြောကျလနျြ့(ငျ) ယနျစဲ့ ရှနျးယနျ့ ဇော့zကုံး(ငျ) ယီးလြို
☞ သူက စတိုငျလညျး လှတယျ၊ အရောငျလညျး တောကျတယျ၊ လကျရာလညျး သပျရပျပါတယျ။
☞ ထားမဲငျ ဇိုကျzကြုံးh(ငျ)ကျော ဟဲယျ အိုးမကေျောကြား တာ့ရှို့h ကုခဲါ့ ခငျြး(ငျ)လိုကျ
☞ ဒီပစ်စညျးကို တရုတျနိုငျငံနဲ့ ဥရောပတိုကျ၊ အမရေိကတိုကျမှာရှိတဲ့ နိုငျငံတှမှော လူကွိုကျမြားပါတယျ။
☞ ထား ရှီhဖဲငျးf ခနျြ့h(ငျ)ရှောငျး ဇိုကျzကျောကြိရှနျ့h(ငျ) ရှို့hတောကျ ဖူပွနျ့ဟှမျးယငျ(ငျ)
☞ ဒီပစ်စညျးက အငျမတနျ ရောငျးကောငျးတယျ၊ နိုငျငံတကာဈေးကှကျမှာ လူကွိုကျမြားတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျ ခဲယျးယီအနျ့ကြောကျh နီမဲငျတဲ့ ယနျ့(ငျ)ဖငျြ ကငျြ့ရှငျ(ငျ) ရှဲငျးh(ငျ)ခနျြh ယီပွနျ့ မနျဇူz နီဖနျးf(ငျ) ခဲါ့ဟုတဲ့ ယောငျးခြို
☞ သုံးစှဲသူတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့စှမျးနိုငျဖို့ ခငျဗြားတို့ပွောတဲ့ နမူနာပုံစံအတိုငျး ကြှနျတျောတို့ ထုတျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
☞ နီမဲငျတဲ့ ခနျြးhဖငျြ ယို ရှဲhမဲာ့ယိုးတနျြ
☞ ခငျဗြားတို့ ကုနျပစ်စညျးတှကေ ဘာအားသာခကျြတှေ ရှိပါသလဲ။
ကုမ္ပဏီရဲ့ ပေါ်လစီအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
12:16 AM C-Sentence , Chinese
ကုမ္ပဏီရဲ့ ပေါ်လစီတွေအကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ နမူနာ ဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Nín rènwéi zěnyàng jìnxíng zhècì tánpàn?
☞ နီရဲင့်rဝေ ဇဲင်zယန့်(င်) ကျင့်ရှင်(င်) ကျဲ့hဆစ်ထန်ဖန့်
☞ ဒီတစ်ခါ ဆွေးနွေးပွဲကို ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ။
☞ Zhè yóu nín lái juédìng.
☞ ကျဲ့h ယိုးနင် လိုင်ကျွယ်တင့်(င်)
☞ အဲဒါကို ခင်ဗျား ဆုံးဖြတ်ပါ။
☞ Nín hǎo! Zhè shì yíngyèbù de Gē Dēng.
☞ နင်းဟောင် ကျဲ့hရှစ်h ယင်(င်)ယဲ့ပုတဲ့ ကဲယ်းတဲင်း(င်)
☞ မင်္ဂလာပါ။ ဒါက အရောင်းဌာနက ကိုသိန်းပါ။
☞ Nín hǎo! Jiàndào nín hěn gāoxìng.
☞ နင်းဟောင် ကျန့်တောက်နင် ဟဲင်ကောင်းရှင့်(င်)
☞ မင်္ဂလာပါ။ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။
☞ Zhè shì wǒmen gōngsī rénshìbù de Wáng Dá.
☞ ကျဲ့hရှစ်h ဝေါ်မဲင်ကုံး(င်)စီး ရဲင်rရှစ်hပုတဲ့ ဝမ်း(င်)တာ
☞ ဒါ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနက ဝမ်တာ ပါ။
☞ Néng jiàndào nín zhēn shì qìngxìng.
☞ နဲင်(င်)ကျန့်တောက်နင် ကျဲင်းhရှစ်h ချင့်(င်)ရှင့်(င်)
☞ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။
☞ Wǒmen de wàimào zhèngcè yíxiàng shì yǐ píngděng hùlì, hùtōng yǒuwú wéi jīchǔ de.
☞ ဝေါ်မဲင်တဲ့ ဝိုက်မောက်ကျဲင့်h(င်)ဆဲ့ ယီရှန့်(င်)ရှစ်h ယီ ဖျင်း(င်)တဲင်(င်)ဟုလိ ဟုထုံး(င်)ယိုဝူ ဝေကျီးချူhတဲ့
☞ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေး ပေါ်လစီက တန်းတူညီမျှ အပြန်အလှန် အကျိုးရှိစေရေးနဲ့ လိုအပ်ချက်ခြင်း အပြန်အလှန် ဖြည့်စွမ်းပေးခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခံထားတာပါ။
☞ Wǒmen xiànzài de zuòfǎ bǐ guòqù línghuó le.
☞ ဝေါ်မဲင် ရှန့်ဇိုက်zတဲ့ ဇော့zဖာf ပီ ကော့ချွိ လင်း(င်)ဟော်တဲ့
☞ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေက အခုဆိုရင် အရင်ကထက် ပိုပြီး အဆင်ပြေ လွတ်လပ်လာပါတယ်။
☞ Nǐmen cǎiqǔ le nǎxiē xīn de zuòfǎ, néngfǒu gěi wǒ jiǎndān jièshào yíxià.
☞ နီမဲင် ဆိုင်းချွီလဲာ့ နာရှဲ ရှင်းတဲ့ဇော့zဖာf နဲင်း(င်)ဖိုf ကေးဝေါ် ကျန်တန်း ကျဲ့ရှောက်hယီရှာ့
☞ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသစ်တွေကို အကျဉ်းချုပ်လောက် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မလား။
☞ Wǒ shì jīngcháng gēn nín diànzǐ yóujiàn liánxì de. Wǒ jiào Mào Mào.
☞ ဝေါ်ရှစ်h ကျင်း(င်)ချန်h(င်) ကဲင်းနင် တျန့်ဇီzယိုကျန့် လျန်ရှိတဲ့ ဝေါ်ကျောက် မောက်မောက်
☞ ကျွန်တော်ဟာ ခင်ဗျားကို E-mail နဲ့ မကြာခဏ ဆက်သွယ်တဲ့ မောင်မောင်ပါ။
ကုမ်ပဏီရဲ့ ပျေါလစီအကွောငျး ဆှေးနှေးခွငျး။
ကုမ်ပဏီရဲ့ ပျေါလစီတှအေကွောငျးကို ဆှေးနှေးကွတဲ့အခါမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ နမူနာ ဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ နီရဲငျ့rဝေ ဇဲငျzယနျ့(ငျ) ကငျြ့ရှငျ(ငျ) ကြဲ့hဆဈထနျဖနျ့
☞ ဒီတဈခါ ဆှေးနှေးပှဲကို ဘယျလိုလုပျရငျ ကောငျးမလဲ။
☞ ကြဲ့h ယိုးနငျ လိုငျကြှယျတငျ့(ငျ)
☞ အဲဒါကို ခငျဗြား ဆုံးဖွတျပါ။
☞ နငျးဟောငျ ကြဲ့hရှဈh ယငျ(ငျ)ယဲ့ပုတဲ့ ကဲယျးတဲငျး(ငျ)
☞ မင်ျဂလာပါ။ ဒါက အရောငျးဌာနက ကိုသိနျးပါ။
☞ နငျးဟောငျ ကနျြ့တောကျနငျ ဟဲငျကောငျးရှငျ့(ငျ)
☞ မင်ျဂလာပါ။ တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျ။
☞ ကြဲ့hရှဈh ဝျေါမဲငျကုံး(ငျ)စီး ရဲငျrရှဈhပုတဲ့ ဝမျး(ငျ)တာ
☞ ဒါ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီ ဝနျထမျးရေးရာဌာနက ဝမျတာ ပါ။
☞ နဲငျ(ငျ)ကနျြ့တောကျနငျ ကြဲငျးhရှဈh ခငျြ့(ငျ)ရှငျ့(ငျ)
☞ တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျတဲ့ ဝိုကျမောကျကြဲငျ့h(ငျ)ဆဲ့ ယီရှနျ့(ငျ)ရှဈh ယီ ဖငျြး(ငျ)တဲငျ(ငျ)ဟုလိ ဟုထုံး(ငျ)ယိုဝူ ဝကြေီးခြူhတဲ့
☞ ကြှနျတျောတို့ ပွညျပကုနျသှယျရေး ပျေါလစီက တနျးတူညီမြှ အပွနျအလှနျ အကြိုးရှိစရေေးနဲ့ လိုအပျခကျြခွငျး အပွနျအလှနျ ဖွညျ့စှမျးပေးခွငျးအပျေါမှာ အခွခေံထားတာပါ။
☞ ဝျေါမဲငျ ရှနျ့ဇိုကျzတဲ့ ဇော့zဖာf ပီ ကော့ခြှိ လငျး(ငျ)ဟျောတဲ့
☞ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှကေ အခုဆိုရငျ အရငျကထကျ ပိုပွီး အဆငျပွေ လှတျလပျလာပါတယျ။
☞ နီမဲငျ ဆိုငျးခြှီလဲာ့ နာရှဲ ရှငျးတဲ့ဇော့zဖာf နဲငျး(ငျ)ဖိုf ကေးဝျေါ ကနျြတနျး ကြဲ့ရှောကျhယီရှာ့
☞ ခငျဗြားတို့ရဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျး အသဈတှကေို အကဉျြးခြုပျလောကျ မိတျဆကျပေးနိုငျမလား။
☞ ဝျေါရှဈh ကငျြး(ငျ)ခနျြh(ငျ) ကဲငျးနငျ တနျြ့ဇီzယိုကနျြ့ လနျြရှိတဲ့ ဝျေါကြောကျ မောကျမောကျ
☞ ကြှနျတျောဟာ ခငျဗြားကို E-mail နဲ့ မကွာခဏ ဆကျသှယျတဲ့ မောငျမောငျပါ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(117) 父
12:08 AM C-Draw , Chinese
“ဖခင်” ကို တရုတ်လို 父 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးက စုတ်ချက် (၄) ချက်ပဲ ရှိပါတယ်။ သင် ရေးသားလေ့လာကြည့်ပါအုံး။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(116) 星
11:38 PM C-Draw , Chinese
ညအခါ ကြည်လင်နေတဲ့ ကောင်းကင်မှာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ကြယ်ကလေးတွေကို ကြည့်ရတာ အရမ်း ကြည်နူးစရာပဲနော်။ “ကြယ်” ကို တရုတ်လို 星 လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(115) 找
11:32 PM C-Draw , Chinese
သင် ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပျောက်ဖူးပါသလား။ “ရှာဖွေသည်” ဆိုတာကို တရုတ်လို 找 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် လေ့ကျင့်ကြမယ့် တရုတ်စာလုံးလေးပါ။
2:57 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေးလည်း အရမ်း နားထောင်ကောင်းပါတယ်။ သင်တို့လည်း ကြိုက်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ခံစားနားဆင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 情人
မြန်မာသံစဉ် - တချိန်က မ (ဒေါင်လွဏ်း)
တရုတ်သီချင်း ကြိုက်သော မိတ်ဆွေများအတွက် အကောင်းဆုံး သီချင်းလေးများကို ရွေးချယ်တင်ဆက် ပေးနေပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် နားဆင်ရမယ့် သီချင်းလေးကတော့-
သီချင်းအမည် - 都是你
မြန်မာသံစဉ် - မြတ်နိုးသူအတွက် (ရိန်မိုး)
2:45 PM C-Songs , Chinese
ဒီသီချင်းလေးကလည်း မြန်မာသံစဉ်တူ တရုတ်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အရမ်း နားထောင်ကောင်းလွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း ခံစားကြည့်ကြပါအုံးနော်။
သီချင်းအမည် - 别说我的眼泪你无所谓
မြန်မာသံစဉ် - အချစ်အိပ်မက်လေး (ကျော်သီဟ)
တရုတ်သီချင်း မြူးမြူးကြွကြွလေးတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်တို့ နားထောင်ကြည့်ကြပါအုံးနော်။ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 爱你
မြန်မာသံစဉ် - မဖွနဲ့ (ရတနာမိုင်)
3:12 PM C-Songs , Chinese
ဒ်ီသီချင်းလေးက ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဟောင်းနေလည်း ကောင်းနေဆဲပါပဲနော်။ နားဆင်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။ မြန်မာသံစဉ်ကိုတော့ အားလုံး ကြားဖူးပြီးသားပါ။
သီချင်းအမည် - 雪山盟
မြန်မာသံစဉ် - နှုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ် (လားရှိုး သိန်းအောင်)
2:47 PM C-Songs , Chinese
မြန်မာသံစဉ်တူ သီချင်းအလန်းလေးတွေကို သင်ကြိုက်ပါသလား။ ဒီနေ့အတွက်လည်း သီချင်းအလန်းလေး တစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပြန်ပြီနော်။
သီချင်းအမည် - I Think I Love You
မြန်မာသံစဉ် - ချစ်ခဲ့တာလား၊ ရူးခဲ့တာလား (၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း)
2:40 PM C-Songs , Chinese
နေ့စဉ် နားဆင်နိုင်စေဖို့ သီချင်းအလန်းလေးတွေ ထပ်လာပြန်ပြီနော်။ အားလုံးသော မိတ်ဆွေများအတွက် ဒီနေ့ နားဆင်ရမယ့် သီချင်းလေးက........
သီချင်းအမည် - 小酒窩
မြန်မာသံစဉ် - ကြည်နူးခြင်း (မေစံပယ်ညို)
2:32 PM C-Songs , Chinese
အလွမ်းသီချင်း အေးအေးလေးတွေကိုမှ ကြိုက်သူများအတွက် ဒီသီချင်းလေးကို ခံစားနားဆင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သံစဉ်တူ မြန်မာသီချင်းလည်း ရှိပါတယ်နော်။
သီချင်းအမည် - 美丽的神话
မြန်မာသံစဉ် - မဆုံနိုင်သော ဘ၀ (ကေအေတီ + ချမ်းချမ်း)
2:24 PM C-Songs , Chinese
ဒီနေ့အတွက် မိတ်ဆွေများ နားဆင်နိုင်စေရန် ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်က အရမ်းမိုက်တယ်နော်။ ဒီသီချင်းလေးကို ခံစားနားဆင် ကြည့်ကြပါစို့။
သီချင်းအမည် - 小冤家
မြန်မာသံစဉ် - မိတယ်၊ မိုက်တယ် (ယုဇန)
2:17 PM C-Songs , Chinese
ကဲ... သင် တရုတ်သီချင်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ နားဆင်ရတာ ကြိုက်ပါသလား။ ဒီကဏ္ဍထဲမှာတော့ သင့်အကြိုက်တွေကို ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။
သီချင်းအမည် - 孤枕難眠
မြန်မာသံစဉ် - မချစ်နဲ့တော့ (ကိုကိုမောင်)
2:10 PM C-Songs , Chinese
ဒီနေ့အတွက် ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ်များ ကဏ္ဍကနေ မိတ်ဆွေများအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နားဆင်ကြည့်ပါအုံးနော်။
သီချင်းအမည် - 他不愛我
မြန်မာသံစဉ် - မညီမျှခြင်း (နေနေ)
2:04 PM C-Songs , Chinese
ဒီတရုတ်သီချင်းလေးကလည်း မြန်မာသံစဉ် ရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ နားထောင်ဖူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ အားပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်။
သီချင်းအမည် - 別說對不起
မြန်မာသံစဉ် - အမြဲတမ်း ချစ်မယ့်သူ (ခင်စုစုနိုင်)
1:57 PM C-Songs , Chinese
အရမ်းမြူးပြီး နားထောင်ကောင်းတဲ့ မြန်မာသံစဉ်တူ တရုတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဒီနေ့အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးက ကြိုက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
သီချင်းအမည် - 偿还
မြန်မာသံစဉ် - အားလုံးသောအချစ်တွေ နားလည်နေ (ချမ်းချမ်း)
6:25 PM C-Sentence , Chinese
ဧည့်သည်ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတပါးဆီကို မိမိက ဧည့်သည်သွားလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် စားသောက်တဲ့အခါမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားပြော ဝါကျတိုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Yào kāifàn le.
☞ ယောက် ခိုင်းဖန့်f လဲာ့
☞ ထမင်းပွဲ ပြင်တော့မယ်။
☞ Ná cài chī ba.
☞ Chèn rè chī ba.
☞ ပူတုန်းလေး စားလိုက်ပါ။
☞ Cháng chang kàn ba.
☞ Chīchi kàn ba.
☞ Zài lái yìdiǎn ba.
☞ နည်းနည်း ထပ်လုပ်ပါအုံး။
☞ Gòu le.
☞ Chī bǎo le.
☞ စားလို့ ဝပါပြီ။
☞ Zài chī yì kǒu ba.
☞ တစ်လုပ်လောက် ထပ်စားပါအုံး။
☞ Dōu shì wǒ zìjǐ zuò de.
☞ တိုးရှစ်h ဝေါ်ဇစ်zကျီဇော့zတဲ့
☞ အားလုံးက ငါ့လက်ရာတွေပါ။
☞ Bú ài chī ma?
☞ စားရတာ မကြိုက်ဘူးလား။
☞ Hǎo chī jiù duō duo chī.
☞ ဟောင်ချီးhကျို့ တောတောချီးh
☞ စားကောင်းရင် များများစားပါ။
☞ Xiǎng chī shénme jiù chī shénme.
☞ ရှန်(င်)ချီးhရှဲhမဲာ့ ကျို့ချီးhရှဲhမဲာ့
☞ စားချင်တာကို စားပါ။
☞ Chī de tài duō le.
☞ ချီးhတဲ့ ထိုက်တောလဲာ့
☞ စားတာ အရမ်းများနေပြီ။
☞ Bù néng zài chī le.
☞ ပုနဲင်(င်) ဇိုက်zချီးhလဲာ့
☞ Qǐng suíbiàn yòng ba.
☞ ကိုယ့်အိမ်လို သဘောထားပြီး သုံးဆောင်ပါ။
☞ Qǐng màn yòng.
☞ ဖြည်းဖြည်း သုံးဆောင်ပါ။
☞ Jiā fàn ma?
☞ ကျားဖန့်f မား
ဧညျ့သညျကို ထမငျးဖိတျကြှေးတဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ၊ သူတပါးဆီကို မိမိက ဧညျ့သညျသှားလုပျရငျပဲဖွဈဖွဈ စားသောကျတဲ့အခါမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ စကားပွော ဝါကတြိုလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ယောကျ ခိုငျးဖနျ့f လဲာ့
☞ ထမငျးပှဲ ပွငျတော့မယျ။
☞ ပူတုနျးလေး စားလိုကျပါ။
☞ နညျးနညျး ထပျလုပျပါအုံး။
☞ စားလို့ ဝပါပွီ။
☞ တဈလုပျလောကျ ထပျစားပါအုံး။
☞ တိုးရှဈh ဝျေါဇဈzကြီဇော့zတဲ့
☞ အားလုံးက ငါ့လကျရာတှပေါ။
☞ စားရတာ မကွိုကျဘူးလား။
☞ ဟောငျခြီးhကြို့ တောတောခြီးh
☞ စားကောငျးရငျ မြားမြားစားပါ။
☞ ရှနျ(ငျ)ခြီးhရှဲhမဲာ့ ကြို့ခြီးhရှဲhမဲာ့
☞ စားခငျြတာကို စားပါ။
☞ ခြီးhတဲ့ ထိုကျတောလဲာ့
☞ စားတာ အရမျးမြားနပွေီ။
☞ ပုနဲငျ(ငျ) ဇိုကျzခြီးhလဲာ့
☞ ကိုယျ့အိမျလို သဘောထားပွီး သုံးဆောငျပါ။
☞ ဖွညျးဖွညျး သုံးဆောငျပါ။
☞ ကြားဖနျ့f မား
တွေဆုံရန် အချိန်ကို ကြိုတင်ချိန်းထားခြင်း။
6:18 PM C-Sentence , Chinese
တဖက်နဲ့တဖက် အလုပ်ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးဖို့ တွေ့ဆုံကြမယ့် အချိန်တွေကို ညှိနှိုင်းကြတဲ့အခါမှာ ပြောဆိုလေ့ရှိတဲ့ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
☞ Wǒ xiǎng gēn nín tántan, nín shénme shíhou yǒu shíjiān?
☞ ဝေါရှန်(င်)ကဲင်းနင် ထန်းထန် နင် ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ယိုရှီhကျန်း
☞ ခင်ဗျားနဲ့ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်၊ ဘယ်ချိန် အားမလဲ ခင်ဗျာ။
☞ Suíshí dōu kěyǐ.
☞ စွေးရှီhတိုး ခဲယ်းယီ
☞ ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အားပါတယ်။
☞ Nàtiān wǒ bù fāngbiàn, kěyǐ gǎi dào běnyuè shíwǔ rì ma?
☞ နာ့ထျန်း ဝေါ်ပုဖန်းf(င်)ပြန့် ခဲယ်းယီကိုင်တောက် ပဲင်ယွဲ့ ရှီးhဝူရွတ်rမား
☞ အဲဒီနေ့မှာ ကျွန်တော် အဆင်မပြေပါဘူး၊ ဒီလ ၁၅ ရက်နေ့ကို ရွှေ့လို့ရမလား။
☞ Nàtiān wǒ chūchāi, kěnéng děi wǎnghòu nuó liǎngtiān.
☞ နာ့ထျန်း ဝေါ်ချူးhချိုင်းh ခဲယ်နဲင်း(င်)တေ ဝမ်(င်)ဟို့နော် လျန်(င်)ထျန်း
☞ အဲဒီနေ့မှာ ကျွန်တော် အလုပ်နဲ့ ခရီးထွက်ရမယ်၊ နောက်နှစ်ရက်လောက်မှ တွေ့လို့ရမယ် ထင်တယ်။
☞ Duì bù qǐ, wǒ mùqián de rìchéng mǎnman de.
☞ တွေ့ပုချီ ဝေါ်မုချန်တဲ့ ရွတ်rချဲင်h(င်) မန်းမန်တဲ့
☞ ဆောရီးပါ၊ အခု ကျွန်တော့် အစီအစဉ်တွေ ပြည့်နေပါပြီ။
☞ Nà děng nín yǒu shíjiān wǒmen zài yuē ba.
☞ နာ့ တဲင်(င်) နင်းယိုရှီhကျန်း ဝေါ်မဲင်ဇိုက်zယွဲပါ့
☞ ဒါဆို ခင်ဗျား အားတဲ့အခါမှ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ချိန်းကြတာပေါ့။
☞ Wǒmen qù cānguān A gōngchǎng de rìqī dìng le ma?
☞ ဝေါ်မဲင်ချွိဆန်းကွမ်း A ကုံး(င်)ချန်h(င်)တဲ့ ရွတ်rချီး တင့်(င်)လဲာ့မား
☞ ကျွန်တော်တို့ A စက်ရုံကို သွားလေ့လာမယ့်အချိန် သေချာပြီလား။
☞ Yǐjīng dìng le. Shì xiàge yuè de shí rì.
☞ ယီကျင်း(င်)တင့်(င်)လဲာ့ ရှစ်h ရှာ့ကဲာ့ယွဲ့တဲ့ ရှီhရွတ်r
☞ သေချာပါပြီ။ နောက်လ ၁၀ ရက်နေ့ပါ။
☞ Néngfǒu gěi wǒ gēn guì gōngsī qiàtán de jīhuì?
☞ နဲင်း(င်)ဖိုf ကေးဝေါ် ကဲင်းကွေ့ကုံး(င်)စီး ချာ့ထန်တဲ့ ကျီးဟွေ့
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆွေးနွေးလို့ ရနိုင်မလား။
☞ Néngfǒu gěi wǒmen zǒngcái tígōng qiàtán de rìqī gēn dìdiǎn?
☞ နဲင်း(င်)ဖိုf ကေးဝေါ်မဲင်ဇုံz(င်)ဆိုင် ထီကုံး(င်) ချာ့ထန်တဲ့ ရွတ်rချီး ကဲင်း တိတျန်
☞ ဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်နဲ့နေရာ ကျွန်တော်တို့ CEO ကို ပေးနိုင်မလား။
☞ Kěyǐ dào guì gōngsī cānguān ma?
☞ ခဲယ်းယီ တောက်ကွေ့ကုံး(င်)စီး ဆန်းကွမ်းမား
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီကို လာလေ့လာလို့ ရမလား။
☞ Kěyǐ láojià nín děng lái bì gōngsī ma?
☞ ခဲယ်းယီလောင်ကျာ့ နင်းတဲင်(င်)လိုင် ပိကုံး(င်)စီးမား
☞ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီကို ခင်ဗျားတို့ လာနိုင်မလား။
☞ Wǒ xiǎng zhǎo ge shíjiān tántan wǒmen hézuò de shìyí.
☞ ဝေါရှန်(င်)ကျောင်hကဲာ့ရှီhကျန်း ထန်းထန် ဝေါ်မဲင် ဟဲယ်ဇော့zတဲ့ ရှစ်hယီ
☞ ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်တစ်ခု ချိန်းထားချင်ပါတယ်။
တှဆေုံ့ရနျ အခြိနျကို ကွိုတငျခြိနျးထားခွငျး။
တဖကျနဲ့တဖကျ အလုပျကိစ်စတှေ ဆှေးနှေးဖို့ တှဆေုံ့ကွမယျ့ အခြိနျတှကေို ညှိနှိုငျးကွတဲ့အခါမှာ ပွောဆိုလရှေိ့တဲ့ နမူနာဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ကဲငျးနငျ ထနျးထနျ နငျ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ယိုရှီhကနျြး
☞ ခငျဗြားနဲ့ ဆှေးနှေးခငျြပါတယျ၊ ဘယျခြိနျ အားမလဲ ခငျဗြာ။
☞ စှေးရှီhတိုး ခဲယျးယီ
☞ ဘယျခြိနျပဲဖွဈဖွဈ အားပါတယျ။
☞ နာ့ထနျြး ဝျေါပုဖနျးf(ငျ)ပွနျ့ ခဲယျးယီကိုငျတောကျ ပဲငျယှဲ့ ရှီးhဝူရှတျrမား
☞ အဲဒီနမှေ့ာ ကြှနျတျော အဆငျမပွပေါဘူး၊ ဒီလ ၁၅ ရကျနကေို့ ရှလေို့ရမလား။
☞ နာ့ထနျြး ဝျေါခြူးhခြိုငျးh ခဲယျနဲငျး(ငျ)တေ ဝမျ(ငျ)ဟို့နျော လနျြ(ငျ)ထနျြး
☞ အဲဒီနမှေ့ာ ကြှနျတျော အလုပျနဲ့ ခရီးထှကျရမယျ၊ နောကျနှဈရကျလောကျမှ တှလေို့ရမယျ ထငျတယျ။
☞ တှပေု့ခြီ ဝျေါမုခနျြတဲ့ ရှတျrခြဲငျh(ငျ) မနျးမနျတဲ့
☞ ဆောရီးပါ၊ အခု ကြှနျတေျာ့ အစီအစဉျတှေ ပွညျ့နပေါပွီ။
☞ နာ့ တဲငျ(ငျ) နငျးယိုရှီhကနျြး ဝျေါမဲငျဇိုကျzယှဲပါ့
☞ ဒါဆို ခငျဗြား အားတဲ့အခါမှ ကြှနျတျောတို့ ပွနျခြိနျးကွတာပေါ့။
☞ ဝျေါမဲငျခြှိဆနျးကှမျး A ကုံး(ငျ)ခနျြh(ငျ)တဲ့ ရှတျrခြီး တငျ့(ငျ)လဲာ့မား
☞ ကြှနျတျောတို့ A စကျရုံကို သှားလလေ့ာမယျ့အခြိနျ သခြောပွီလား။
☞ ယီကငျြး(ငျ)တငျ့(ငျ)လဲာ့ ရှဈh ရှာ့ကဲာ့ယှဲ့တဲ့ ရှီhရှတျr
☞ သခြောပါပွီ။ နောကျလ ၁၀ ရကျနပေ့ါ။
☞ နဲငျး(ငျ)ဖိုf ကေးဝျေါ ကဲငျးကှကေုံ့း(ငျ)စီး ခြာ့ထနျတဲ့ ကြီးဟှေ့
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီနဲ့ ဆှေးနှေးလို့ ရနိုငျမလား။
☞ နဲငျး(ငျ)ဖိုf ကေးဝျေါမဲငျဇုံz(ငျ)ဆိုငျ ထီကုံး(ငျ) ခြာ့ထနျတဲ့ ရှတျrခြီး ကဲငျး တိတနျြ
☞ ဆှေးနှေးရမယျ့ အခြိနျနဲ့နရော ကြှနျတျောတို့ CEO ကို ပေးနိုငျမလား။
☞ ခဲယျးယီ တောကျကှကေုံ့း(ငျ)စီး ဆနျးကှမျးမား
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီကို လာလလေ့ာလို့ ရမလား။
☞ ခဲယျးယီလောငျကြာ့ နငျးတဲငျ(ငျ)လိုငျ ပိကုံး(ငျ)စီးမား
☞ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီကို ခငျဗြားတို့ လာနိုငျမလား။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ကြောငျhကဲာ့ရှီhကနျြး ထနျးထနျ ဝျေါမဲငျ ဟဲယျဇော့zတဲ့ ရှဈhယီ
☞ ကြှနျတျောတို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆှေးနှေးဖို့ အခြိနျတဈခု ခြိနျးထားခငျြပါတယျ။
6:10 PM C-Sentence , Chinese
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါ တဖက် ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို သိထားမှသာလျှင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါကြောင့် တဖက် ကုမ္ပဏီအကြောင်း စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ နမူနာဝါကျများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Kěyǐ qǐng nín shuōmíng yíxià guì gōngsī de gàikuàng ma?
☞ ခဲယ်းယီ ချင်(င်)နင်ရှောhမျင်(င်)ယီရှာ့ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ကိုက်ခွမ့်(င်)မား
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီအကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ကို ပြောပြနိုင်မလား။
☞ Kěyǐ de. Wǒmen gōngsī chénglì yú yī jiǔ jiǔ wǔ nián, zhǔyào cóngshì kuàngchǎnpǐn mǎimài.
☞ ခဲယ်းယီတဲ့ ဝေါ်မဲင်ကုံး(င်)စီး ချဲင်h(င်)လိယွီ ယီးကျိုးကျိုဝူနျန် ကျူhယောက်ဆုံ(င်)ရှစ်h ခွမ့်(င်)ချန်းhဖျင် မိုင်မိုက်
☞ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ သတ္တုလုပ်ငန်းကို အဓိက ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။
☞ Guì gōngsī yǒu duōshao yuángōng?
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီးယို တောရှောင်hယွမ်ကုံး(င်)
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီမှာ ဝန်ထမ်းဘယ်လောက် ရှိသလဲ။
☞ Wǒmen gōngsī yígòng yǒu wǔbǎi yáungōng.
☞ ဝေါ်မဲင်ကုံး(င်)စီး ယီကုံ့(င်)ယို ဝူးပိုင်ယွမ်ကုံး(င်)
☞ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅၀၀ ရှိပါတယ်။
☞ Yìnián de yíngyè é yǒu duōshao?
☞ ယိနျန်တဲ့ ယင်(င်)ယဲ့အဲယ် ယိုတောရှောင်h
☞ တစ်နှစ်မှာ ရောင်းအားပမာဏ ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲ။
☞ Dàyuē shì yìbǎi yì miǎnbì.
☞ တာ့ယွဲရှစ်h ယိပိုင်ယိ မြန်ပိ
☞ မြန်မာငွေ ၁၀ ဘီလီယံလောက် ရှိပါတယ်။
☞ Guì gōngsī chúle Yǎngguāng yǒu bànshìchù hái yǒu nǎge dìfāng yǒu?
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီး ချူhလဲာ့ ယန်(င်)ကွမ်း(င်) ယို ပန့်ရှစ်hချုh ဟိုင်းယို နာကဲာ့တိဖန်းf(င်) ယို
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်မြို့အပြင် တခြား ဘယ်မြို့မှာ ရုံးခွဲရှိသေးလဲ။
☞ Wǒmen zài guónèi gè dàchéngshì dōu shèlì yǒu fēngōngsī, cǐwài zài hǎiwài yě hái yǒu wǔ jiā fēngōngsī.
☞ ဝေါ်မဲင်ဇိုက်z ကော်နေ့ကဲာ့တာ့ချဲင်h(င်)ရှစ်h တိုး ရှဲ့hလိယို ဖဲင်းfကုံး(င်)စီး ဆေဝိုက် ဇိုက်zဟိုင်ဝိုက်ယယ် ဟိုင်းယို ဝူကျား ဖဲင်းfကုံး(င်)စီး
☞ ကျွန်တော်တို့က ပြည်တွင်းမြို့ကြီးတိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီခွဲတွေ ဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်၊ ပြည်ပမှာလည်း ကုမ္ပဏီခွဲ ၅ ခု ရှိပါတယ်။
☞ Guì gōngsī nǎ yìzhǒng shāngpǐn zuì shòu huānyíng?
☞ ကွေ့ကုံး(င်)စီး နာယိကျုံh(င်) ရှန်းh(င်)ဖျင် ဇွေ့zရှို့hဟွမ်းယင်(င်)
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီ ထုတ်ကုန်ထဲမှာ ဘယ်ဟာက လူကြိုက်အများဆုံးလဲ။
☞ Printer ပါ။
☞ Qǐng wèn, néngfǒu jièshào yíxià guì gōngsī de jīngyíng nèiróng, tèbié shì zhǔyào jīngyíng shénme shāngpǐn.
☞ ချင်(င်)ဝဲင့် နဲင်း(င်)ဖိုf ကျဲ့ရှောက်hယီရှာ့ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ကျင်း(င်)ယင်(င်)နေ့ရုံr(င်) ထဲ့ပြယ်ရှစ်h ကျူhယောက်ကျင်း(င်)ယင်(င်) ရှဲhမဲာ့ရှန်းh(င်)ဖျင်
☞ မေးပါရစေ၊ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီက ဘယ်နယ်ပယ်မှာ အဓိကလုပ်ကိုင်နေသလဲ၊ အထူးသဖြင့် ဘာကုန်ပစ္စည်းတွေကို အဓိက ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာလဲ။
☞ Rúguǒ nénggòu jièshào yíxià guì gōngsī de yíngyè nèiróng, jiāng yǒulì yú jīnhòu xiānghùjiān de màoyì láiwǎng.
☞ ရူးrကော် နဲင်(င်)ကို့ကျဲ့ရှောက်hယီရှာ့ ကွေ့ကုံး(င်)စီးတဲ့ ယင်(င်)ယဲ့နေ့ရုံr(င်) ကျန်း(င်) ယိုလိ ယွီကျင်းဟို့ ရှန်း(င်)ဟုကျန်းတဲ့ မောက်ယိလိုင်းဝမ်(င်)
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီ အဓိကလုပ်ကိုင်တဲ့ နယ်ပယ်ကို သိရင် နောင်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးအမြတ်တွေ ရနိုင်ပါမယ်။
☞ Qǐng gàozhī guì gōngsī zhìzào de zhǔyào chǎnpn.
☞ ချင်(င်)ကောက်ကျီးh ကွေ့ကုံး(င်)စီး ကျိhဇောက်zတဲ့ ကျူhယောက်ချန်းhဖျင်
☞ ခင်ဗျားတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အဓိကထုတ်ကုန်ကို သိပါရစေ။
နှဈဦးနှဈဖကျ ပူးပေါငျးလုပျကိုငျ ဆောငျရှကျကွတဲ့အခါ တဖကျ ကုမ်ပဏီအကွောငျးကို သိထားမှသာလြှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု ပိုအဆငျပွမှောပါ။ ဒါကွောငျ့ တဖကျ ကုမ်ပဏီအကွောငျး စုံစမျးတဲ့အခါမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ နမူနာဝါကမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ခဲယျးယီ ခငျြ(ငျ)နငျရှောhမငျြ(ငျ)ယီရှာ့ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ကိုကျခှမျ့(ငျ)မား
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီအကွောငျး အကဉျြးခြုပျကို ပွောပွနိုငျမလား။
☞ ခဲယျးယီတဲ့ ဝျေါမဲငျကုံး(ငျ)စီး ခြဲငျh(ငျ)လိယှီ ယီးကြိုးကြိုဝူနနျြ ကြူhယောကျဆုံ(ငျ)ရှဈh ခှမျ့(ငျ)ခနျြးhဖငျြ မိုငျမိုကျ
☞ ဟုတျကဲ့။ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီကို ၁၉၉၅ ခုနှဈမှာ တညျထောငျခဲ့တာပါ။ သတ်တုလုပျငနျးကို အဓိက ဆောငျရှကျခဲ့တာပါ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးယို တောရှောငျhယှမျကုံး(ငျ)
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီမှာ ဝနျထမျးဘယျလောကျ ရှိသလဲ။
☞ ဝျေါမဲငျကုံး(ငျ)စီး ယီကုံ့(ငျ)ယို ဝူးပိုငျယှမျကုံး(ငျ)
☞ ကြှနျတျောတို့ ကုမ်ပဏီမှာ ဝနျထမျးပေါငျး ၅၀၀ ရှိပါတယျ။
☞ ယိနနျြတဲ့ ယငျ(ငျ)ယဲ့အဲယျ ယိုတောရှောငျh
☞ တဈနှဈမှာ ရောငျးအားပမာဏ ဘယျလောကျ ရှိပါသလဲ။
☞ တာ့ယှဲရှဈh ယိပိုငျယိ မွနျပိ
☞ မွနျမာငှေ ၁၀ ဘီလီယံလောကျ ရှိပါတယျ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီး ခြူhလဲာ့ ယနျ(ငျ)ကှမျး(ငျ) ယို ပနျ့ရှဈhခြုh ဟိုငျးယို နာကဲာ့တိဖနျးf(ငျ) ယို
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီက ရနျကုနျမွို့အပွငျ တခွား ဘယျမွို့မှာ ရုံးခှဲရှိသေးလဲ။
☞ ဝျေါမဲငျဇိုကျz ကျောနကေဲ့ာ့တာ့ခြဲငျh(ငျ)ရှဈh တိုး ရှဲ့hလိယို ဖဲငျးfကုံး(ငျ)စီး ဆဝေိုကျ ဇိုကျzဟိုငျဝိုကျယယျ ဟိုငျးယို ဝူကြား ဖဲငျးfကုံး(ငျ)စီး
☞ ကြှနျတျောတို့က ပွညျတှငျးမွို့ကွီးတိုငျးမှာ ကုမ်ပဏီခှဲတှေ ဖှငျ့ထားခဲ့ပါတယျ၊ ပွညျပမှာလညျး ကုမ်ပဏီခှဲ ၅ ခု ရှိပါတယျ။
☞ ကှကေုံ့း(ငျ)စီး နာယိကြုံh(ငျ) ရှနျးh(ငျ)ဖငျြ ဇှေ့zရှို့hဟှမျးယငျ(ငျ)
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီ ထုတျကုနျထဲမှာ ဘယျဟာက လူကွိုကျအမြားဆုံးလဲ။
☞ ခငျြ(ငျ)ဝဲငျ့ နဲငျး(ငျ)ဖိုf ကြဲ့ရှောကျhယီရှာ့ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ကငျြး(ငျ)ယငျ(ငျ)နရေုံ့r(ငျ) ထဲ့ပွယျရှဈh ကြူhယောကျကငျြး(ငျ)ယငျ(ငျ) ရှဲhမဲာ့ရှနျးh(ငျ)ဖငျြ
☞ မေးပါရစေ၊ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီက ဘယျနယျပယျမှာ အဓိကလုပျကိုငျနသေလဲ၊ အထူးသဖွငျ့ ဘာကုနျပစ်စညျးတှကေို အဓိက ထုတျလုပျရောငျးခတြာလဲ။
☞ ရူးrကျော နဲငျ(ငျ)ကို့ကြဲ့ရှောကျhယီရှာ့ ကှကေုံ့း(ငျ)စီးတဲ့ ယငျ(ငျ)ယဲ့နရေုံ့r(ငျ) ကနျြး(ငျ) ယိုလိ ယှီကငျြးဟို့ ရှနျး(ငျ)ဟုကနျြးတဲ့ မောကျယိလိုငျးဝမျ(ငျ)
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီ အဓိကလုပျကိုငျတဲ့ နယျပယျကို သိရငျ နောငျမှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပွီး နှဈဦးနှဈဖကျ အကြိုးအမွတျတှေ ရနိုငျပါမယျ။
☞ ခငျြ(ငျ)ကောကျကြီးh ကှကေုံ့း(ငျ)စီး ကြိhဇောကျzတဲ့ ကြူhယောကျခနျြးhဖငျြ
☞ ခငျဗြားတို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ အဓိကထုတျကုနျကို သိပါရစေ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(114) 以
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(113) 是
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(112) 要
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(111) 快
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(110) 爱
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(109) 可
တွေ့ဆုံပွဲပြီးနောက် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဆိုခြင်း။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(108) 香
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(107) 海
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(106) 光
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(105) 帮
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (87)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (86)။
ခံစားနားဆင် တရုတ်သံစဉ် (85)။
သတ်မှတ်ထားသော ချိန်းဆိုချက်အား ပြောင်းလဲခြင်း။
ဧည့်သည်ကို တွေ့ဆုံရန် ကြိုတင်ချိန်းဆိုခြင်း။
အထက်လူကြီး သို့မဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကို မိတ်ဆက်ခြ...
ဧည့်သည်များ ရုံးဧည့်ခန်းသို့ ရောက်ရှိခြင်း။
ဧည့်သည်ကို ကုမ္ပဏီသို့ ကြိုဆိုခြင်း။
အားလပ်ရက်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(104) 果
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(103) 办
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(102) 物
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(101) 色
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(100) 包
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(99) 动